Xai Yak Techonology: December 2011
Online တက်နေတုန်း အလုပ်လည်း သိပ်မရှိတာနဲ့ ကျွန်တော့် Gtalk မှာရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ Custom Message မှာ ရေးထားတာလေးတွေကို သဘောကျလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။
ရှေ့ကသွားပါဆိုလည်း အီးအီးပေါက်တယ် နောက်ကလိုက်ခဲ့ဆိုလည်း ဖိနပ်တတ်နင်းတယ် ဘေးတိုက် ကျတော့ အရပ်ပုလို့တဲ့ ကဲ နင်နဲ့ငါ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကျမလဲ...........
အေး... ငါဆိုတဲ့ကောင်က မလုပ်ဖူးဆို လုံးဝမလုပ်ဘူးကွ။ လုပ်ပီဟေ့ ဆိုရင်လဲ အိယောင်ဝါးပဲ။
အခုခေတ်မှာ အိုင်တွေ့တိုင်း ခြေဆေးတက်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေပေါတယ်တဲ့ ... ခြေဆေးမခံချင်ရင် အိုင်ထဲကရေမဖြစ်အောင် နေပေါ့ ... ဘယ်သူမှတော့ သောက်ရေအိုးထဲကရေကို ခြေမခတ်ဆေးပါဘူး ...
ကိုလှရွှေ နေမကောင်းဖြစ်လို့ .....
အဲဒါနဲ့ အမေရိကန်နဲကိုရီးယားစာချုပ် ချုပ်လိုက်တာ....
ရည်းစား ဟုတ်လား သွားစမ်းပါ ရည်းစားမထားချင်သေးလို့ အွန်လိုင်းပဲလာထိုင်နေတာ ဆောရီးပဲ သူငယ်ချင်း မင်းကိုကြူနေတယ်ထင်နေရင်တော့ အခုချက်ချင်းငါ့အကောက်ထဲက ထွတ်သွားလိုက်တော့
ငါမာနကြီးနေတယ်ဆိုတာလဲ တိမ်တွေလိုရေမှုန်ပါဟယ် .ယုံကြည်ထားငါဟာလေညင်းလေးလိုရင်တွေခုန်စပါကွယ်
အရည်အသွေးမပြည့်သေးခင် ကလေး ကလှောင် ခွေးကဟောင်မည်... အမောင်ဒီအတွက် စိတ်မပျက်နဲ့ ရှေ့ဆက်ကြိုးကုတ် အလုပ်လုပ်ပါ။ :
နင်နဲ့ငါတစ်ခေါက်ပြန်ဆုံရင် ငါ့မာန ငါရိုက်ချိုးပြီး နင့်ရှေ့ဒူးထောက်မော်ဖူးပါရစေကွယ်
ပျားရည်တွေကုန်အောင် လျက်သွားပါလိမ့် . ငါ့အလှည့်ကျ
ပျော်နေပြီလား....အဝေးမှာအဆင်ပြေနေတော့ ငါဆိုတဲ့ အကောင်ကိုမေ့ ကာထားဖြေနေပြီပေ့ါ ပြန်မလာလဲနင့်ကို ငါတာဝန်ကျေအောင်မျှော်နေမှာနော်
မဖြစ်သေးခင် ကံကြမ္မာကို မယုံဖို့နဲ့... ဖြစ်ပြီးသွားရင် ကံကြမ္မာကို ယုံဖို့ပဲ....
ခေါင်းလောင်းထိုးပြီး လျှူလိုက်မယ်... မလွမ်းတက်တာတော့ တော်တော်ခက်တယ်...
မင်းက မင်းကို ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာ ငါက ငါ့ကို မချစ်တဲ့
သူတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရတာ အေးဆေးပဲ...
အေးအေးဆေးဆေးနေ နေတာနော် ငါ့ဖာသာ အေးဆရာလိုလိုဆရာမလိုလို သူတော်ကောင်းလိုလိုလာမလုပ်နဲ့ အပြင်မှာပြောင်လာပြော ခိုခြောင်ခိုးဝှပ်နဲ့ အွန်လိုင်းကလာတိုက်ခိုက်မနေနဲ့
အဆင့်အတန်းဆိုတာ ငွေကြေးမဟုတ်ဘူး ပညာမဟုတ်ဘူး ဂုဏ်မဟုတ်ဘူး ထားရှိရမယ့် စိတ်ဓါတ် စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့် လူ့ ကျင့်ဝတ် လူ့စည်းကမ်း ကိုပြောတာ....
လုပ်ချင်တာကို ရအောင်လုပ်နိုင်တာက ဘဝပဲ...။
what's wrong ? Mind is under the ground
♫ ဘ၀ဆက်တိုင်း England မှာ ဘောလုံးသမား, Korea မှာ မင်းသား, ဂျပန်မှာ
ယာကူဇာ, US မှာ Mafia, မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူဌေးသား ဖြစ်ရပါစေ၊
လေတိုက်တိုင်း ယိမ်းနွဲ့တတ်တဲ့ သစ်ရွက်တွေအစား ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအဖြစ် နောက်လူတွေ နမူနာယူဖို့ အတိတ်တွေကို မြေမြှုပ်ပစ်လိုက်တော့မယ်
ဒီမှာချစ်သူ....မင်းအတွက်ဆို..Zoo ထဲကဆင် Assကို ပင်အပ်နဲ
့ထိုးရထိုးရ..တောထဲကခြင်္သေ့ကို လောက်စလုံးနဲ့စော်ရစော်ရ Mr Bush
ကိုဒီမှာငချွတ် မင်းဟာဖွတ်လို့ ပြောရပြောရဟာ..အသက်မရူပါးစပ်မကူဘဲ စက္ကန်
နွားခြေရာခွက်ထဲက ရေကို . . . သမုဒ္ဒရာကြီးမှတ်ပြီး . . . လက်ပစ်ကူးချင်နေသူတွေနဲ့ စကားပြောရတာ . . . မောတယ်ကွာ . . . :P
နင်းဖြတ်သွားတိုင်း ခြေရာကျန်ခဲ့ ရအောင် ငါ့နှလုံးသားက သဲမြေမဟုတ်ဘူး
ချစ်မိတဲ့ ရင်ခွင်အစုံဟာ.......လှိုက်မောစွာ.......မင်းလေရဲ့ ရယ်သံတွေမှာ.......ခိုနားကာ.........နှလုံးသားရဲနေရာတွေဟာ.......မင်းလေးအတွက်ပါဘဲ.......အကုန်ယူသွားပါ
အချစ်ကြောင့် သေမသွားပေမယ့် သေလောက်တဲ့အထိ ချစ်ခဲ့တယ် မင်းထားရစ်လဲ ကျေနပ်တယ်
မင်းနှိပ်စက်လဲ ကျေနပ်တယ် မနက်ဖြန်ဆိုတာ ရှိနေသမျှ မင်းကိုဆက်ချစ်
တတ်ချင်ရင် သင်.တော်ချင်ရင်ကျင့် မမေ့ချင်ရင် စိတ်ဝင်စား မမှားချင်ရင် ပြန်စစ်
အချစ်ကို မတမ်းတ။ ချစ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ အချစ်ခံရရန်သော်လည်းကောင်း ငြင်းဆိုခြင်းမရှိ။ ယင်းအတွက် သူတို့သည် အထီးတည်းလည်း ပျော်၏၊ ချစ်သူနှင့်လည်း ပျော်ရွှင်သည်သာဖြစ်၏။
I REALLY LOVE YOU(BAO BEI OR YRQ OR NAT) with my heart & I KEEP OUR(u & me PROMISE REAL TOGETHER & FOREVER
အသားမကျသေးတဲ့ မျက်လုံးတွေက နေရာတကာကို လိုက်ပြီးချိန်ရွယ်နေတယ် ငါ့မှာလဲ သေနတ်တစ်လက်လိုလို စက်နာရီ ဆန်ဆန် ဘာသာပြန်ရခက်တယ်...။
ငါက တွေ့နေကျ၊ မြင်နေကျ၊ ရိုးရိုးလူမျိုးပေါ့ ပန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကောက်ရိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းလာပစ်ပေါက်ရင်တော့ ကြောက်တတ်တဲ့ ကောင်မျိုးလေ..။
ဆောင်းတစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နှင်းတစ်စ
ပိုင်ရှင်မရှိပါ ရည်းစားစကား ပြောခြင်းကိုလက်ခံစဉ်းစားပေးမည်
အချက်အပြုတ် မောင့် အလုပ်
အပြေးအလွှား မောင် ဈေးသွား
ဖွတ်အလျှော် မောင် ပဲနော်
ကလေးထိန်းကျောင်း မောင် ပဲကောင်း
ကျောင်းကြိုကျောင်းပို့ မောင် အဖို့
ထင်းမီးသွေးဝယ် မောင် ပဲကွယ်
ဆန်ဆီရှာလည်း မောင် ပါပဲ
ဖျားနာပြုစု မောင် ပဲကု
အင်္ကျီဝယ်ချုပ် မောင် မဟုတ်
လက်ဝတ်ရတနာ မ အတွက်ပါ
ဆလင်းဘက်အသစ် မ အတွက်ဖြစ်
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွား မောင် မတား
အလှပြင်ဆိုင် မ ပဲထိုင်
အသစ်အဆန်းအထည် မ ပဲဝယ်
ဘာပဲပြောပြော မ သဘော......... မ သဘော။
My name is ဖိုးရှုပ်...
All call me အမျိုးယုတ်....
I Live in တဲစုတ်.... I
only eat ပဲပြုတ်...
I walk in လမ်းစုတ်..
So I meet မိပုတ်...
I give her အမှိုတ်ထုတ်...
So she beat me with ထီး
စာကမရ ၀ိုင် သာချ ...
စိတ်လေတယ်နော် beer ဆော် ...
အသည်းကကွဲ wiskey ဆွဲ...
အပျင်းပြေသောက် spy ဖောက်..
သောက်ပြီးရင်ဇိမ် ဒီ Champain ..
ပိုက်ဆံကမွဲ ဘီအီးဆွဲ .. စိတ်ညစ်လို့ထိုင် ခေါင်ရည်ဆိုင်
ပညာသင်ခိုက် '' မ''ဘက်လိုက်ပါ.. မ ဘက်လိုက်လျှင် စိတ်ရွှင်ဥာဏ်ထက် တော်ကီညက်၏ ... သင်၏တော်ကီယုံကြည်လာလျှင်... အပျိုကညာ အလိုလိုသာ သင်ဘာပြောပြော ရေစုန်မျော၏။ လေအတိုက်ကြွေလိုက်မည်ဆိုသည့် ပျိုကညာ
ချစ်ပါဗျာ ပျော်ပါဗျာ ဆန္ဒတွေပြည့်အောင် ကျနော်မျိုးကြီးကို ချက်နိုင်ပါတယ်....ဒါပေမယ့် ချက်လို.ပြီးရင် ချက်ချင်းပြန်မေ့ပေးပါ။
ထားခဲ့မယ်ဆို ပြန်လှည့်ကြည့်မနေပါနဲ့ ဒီရင်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့....
ဘုရားပေးသလောက်ထဲမှာမှ ငါဟာ ကိုယ်နဲ့တန်သလောက်ပဲ ရခဲ့တဲ့သူပါ ဘဝကို နေတတ်အောင် ကြိုးစားနေရတယ် ရောင့်ရဲနိုင်အောင် ကျင့်ကြံနေရတယ် ကိုယ့်အထာနဲ့ ကိုယ့်အထွာနဲ့ပေါ့
Posted by Xai Yak at 10:52 No comments:
ဟောဒီမှာ Chrismas နဲ့ News Year လက်ဆောင်တွေ Free ပေးနေပါတယ်။ ယူကြဦးမလား ဗျို့!
Xmas နီးပြီဆိုရင် Website တောတောများများက Free တွေပေးကြတော့ လိုက်ရှာရင် http://www.bdlot.com/special-offer/ ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်လေးကို သွားတွေ့တယ်။ သူကတော့ အခု BDLot Video Converter ကို Free ပေးထားတဲ့အပြင် BDlot DVD Backup Pack
ကိုလည်း 50% Off ပေးထားတယ်။ အဲ့ဒါတွေထပ် ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ အဲ့ဒီဆိုဒ်ရဲ့အောက်မှာပဲ Chrismas လက်ဆောင်တွေပေးတယာကိုပဲ။ Chrismas Tree က လက်ဆောင်လေးတွေကို Click နှိပ်ပြီး ဆုတွေယူယုံပဲ။ ပေးတာတွေကတော့ -
2. BDlot DVD Clone Ultimate
4. DVD Clone Ultimate 40% Off Coupon
ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော်လည်း iPod များရမလားလို့ စိတ်ကူးနဲ့ Click လိုက်နှိပ်တာ လက်ဆောင်ထုတ်တွေတာ ကုန်သွားတယ် ကံမကောင်းရှာဘူး။
Don't lose heart, please try again, I wish you good luck ! တဲ့ဗျာ။
ဘယ်ရမလဲ နောက်တခါ Reflash လုပ်ပြီးထပ်နိုက်လိုက်တာ နံပါတ် ၂ မဲပေါက်တယ်ဗျ။
You has won BDlot DVD Clone Ultimate
Download Link: http://www.bdlot.com/download/bdlot-dvd-clone-ultimate-setup.exe
License Code: BU-UWUPYDZW-NOSMKO
ဒီလောက်နဲ့တော့ မကျေနပ်နိုင်သေးဘူးလေ။ လိုချင်တာက iPod လေ။ Reflash လုပ်ပြီးထပ်နှိုက်တာပေါ့။ အခုချိန်ထိတော့ ဆုနံပါတ် ၂၊၃၊၄ အကုန်ပေါက်ပြီးပြီ။ နံပါတ် ၁ကတော့ အခုထိ မပေါက်သေးဘူး။
၂၀၁၂ ကို မကြာခင်ရောက်တော့မယ့် အချိန်မှာ မိမိနဲ့ မိမိသူငယ်ချင်းတွေကို ပျော်ရွင်စေမယ့် ဆိုဒ်လေးပါ။ လက်ဆောင်လေးတွေ နှိုက်ယူရင် ပျော်ရွင်နိုင်ကြပါစေ
Posted by Xai Yak at 10:38 No comments:
ကမ္ဘာ့တွေ့ရတဲ့အတော်ဆုံး ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရွေးတယ် တဲ့။ ဆန်ကာတင် သုးံဖွဲ့ ကျန်တယ်။ CIA ရယ်၊ FBIရယ်၊ မြန်မာထောက်လှမ်းရေးရယ်။ဒိုင်အဖွဲ့က သူတို့ကို ဗိုလ်လုပွဲ အနေနဲ့ တစ်ခု စမ်းသပ်လိုက်တယ်၊ တောအုပ် တစ်ခုထဲ ယုန်တစ်ကောင် ထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီယုန်ကို သုံးဖွဲ့စလုံးက လိုက်ရှာရတယ်။
... ပထမဆုံး CIA ၀င်သွားတယ်။
... သူတို့က သူတို့ရဲ့နည်းတွေအတိုင်း လုပ်တယ်။ တိရိစ္ဆာန် သတင်းပေးတွေကို နေရာအနှံ့ ချထားတယ်။ သစ်ပင်တွေကိုလည်း စပိုင် လုပ်ခိုင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးဝ မတွေ့ဘူး။ ရှုံးတယ်။အထူးစုံစမ်း ထောက်လှမ်းမှု ၃ လ အကြာမှာ ထွက်လာတဲ့ CIA ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ "ဒီတောထဲမှာ ယုန် လုံးဝ မရှိဘူး" လို့ ရေးထားတယ်။
သူကတော့ သူလုပ်နေကျအတိုင်း မြေလှန်ရှာတယ်။ ၂ ပတ်လောက်ရှာတယ်။ မတွေ့ဘူး။ မတွေ့တဲ့ အဆုံးမှာ တောကို မီးရှို့ ပစ်ခဲ့တယ်။
း)) နောက်ဆုံးကျတော့ မြန်မာထောက်လှမ်းရေးက ကော့ပက်ကော့ပက်နဲ့ဝင်သွား တာပေါ့။ သိပ်မကြာပါဘူး။ မိလာတယ်။ဒါပေမယ့် ယုန်တော့မဟုတ်ဘူး။ ၀က်ဝံတစ်ကောင်။၀က်ဝံက လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ဘာအော်လာတယ်မှတ်လဲ.. အမလေးဗျ.. ကြောက်ပါပြီဗျ..ကျနော်ယုန်ပါခင်ဗျ..မနှိပ်စက်ပါနဲ့ တော့.. ကြောက်ပါပီ
ကျနော်ယုန်အစစ်ပါခင်ဗျတဲ့ ... တဲ့
Posted by Xai Yak at 10:17 No comments:
ဆောင်းဟာ ဆောင်းနဲ့မတူတဲ့ စွေစောင်းစောင်းမိုးတွေကို
သီချင်းဟောင်းတပုဒ်ကို Version အသစ်ပြန်လုပ်ထားပြီး
နေ့တွေကိုဖောင်ဖျက် ဘဝတွေလည်းနက်ခဲ့ရပြီ။ ။
Posted by Xai Yak at 10:08 No comments:
HP Photosmart Printer တွေကို Master reset ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ
Master reset လုပ်နည်း
ပထမဦးဆုံး Printer ကို ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ power ကြိုးကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ.
Printer ရဲ့ ညာဖက်အခြမ်းကို ဖွင့်လိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ သေသေချာချာကြည့်ပါ main circuit board အပြားနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ ကြိုးအပြားလေး နှစ်ခု
"flat ribbon cables" အဖြူရောင် (သို့) အမဲရောင် တစ်မျိုးမျိုးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော် စမ်းတုန်းကတော့ ကြိုးကအဖြူရောင်ပါ. ဒါကတော့ သူထည့်ချင်တဲ့ကြိုးအရောင် ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမဲရောင်လဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. အဲ့ဒီ့ "flat ribbon cables" လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုးအပြားနှစ်ခုစလုံးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ. ပြုတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ အတင်းဆွဲမဖြုတ်ပါနဲ့။
ကြိုးတွေကို ဖြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ printer ကို power ကြိုးထိုးလိုက်ပြီးတော့ Power button ကို နှိပ်ပေးပြီး printer ကို ဖွင့်လိုက်ပါ. ပြီးတော့ error message တစ်ခုပေါ်လာတဲ့အထိ စောင့်လိုက်ပါ. error message ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ Ok ကို နှိပ်ပေးပါ.
Power ကြိုးကို Power button ကို မနှိပ်ပဲနဲ့ Printer power ကြိုးထိုးထားတဲ့ plug ကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ.
ပထမတုန်းက ဖြုတ်ထားခဲ့တဲ့ "flat ribbon cables" ကြိုးနှစ်ပြားကို main circuit board မှာ ပြန်တပ်လိုက်ပါ. တပ်တဲ့နေရာမှာ စောင်းပြီးမထည့်ပါနဲ့ ကြိုးကို တည့်တည့်ထားပြီးတော့ သေသေချာချာ မိမိရရလေး တပ်ပေးပါ.
ပြီးတာနဲ့ printer ကို plug ထိုးပြီးတော့ power button ကို နှိပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ. error message ပျောက်သွားတာကို တွေ့ရမှာပါ. မှင်ပြဿနာဖြစ်ရင်လဲ ဖြစ်တဲ့ မှင်ပြဿနာ error ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်.
Master reset လုပ်နည်း (ဒုတိယနည်း)
Printer ရဲ့ ညာဖက်အခြမ်းကို ဖွင့်လိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ သေသေချာချာကြည့်ပါ main circuit board အပြားနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ ကြိုးအပြားလေး နှစ်ခု "flat ribbon cables" အဖြူရောင် (သို့) အမဲရောင် တစ်မျိုးမျိုးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော် စမ်းတုန်းကတော့ ကြိုးကအဖြူရောင်ပါ. ဒါကတော့ သူထည့်ချင်တဲ့ကြိုးအရောင် ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမဲရောင်လဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. အဲ့ဒီ့ "flat ribbon cables" လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုးအပြားနှစ်ခုစလုံးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ. ပြုတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ အတင်းဆွဲမဖြုတ်ပါနဲ့။
ကြိုးတွေကို ဖြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ printer ကို power ကြိုးထိုးလိုက်ပြီးတော့ Power button ကို နှိပ်ပေးပြီး printer ကို ဖွင့်လိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ printer အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အသံတွေ ကြားရပါလိမ့်မယ်. ဘာသံမှ မကြားရတဲ့အထိ စောင့်ပေးပါ.
အားလုံး ဘာသံမှမကြားရတော့ဘူး ဆိုတာနဲ့ cancel button နဲ့ power button ကို ပြိုင်တူ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ. တစ်ချိန်တည်းမှာ ပြိုင်တူ နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်. ဟိုတစ်နေ့က canon လို button တစ်ခုနှိပ်ပြီးမှ နောက် button ကို နှိပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး.
အဲ့ဒီ့ button နှစ်ခုကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ "Enter Special Key Combo" ဆိုတဲ့ message box ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ်. Left key ကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် Ok key ကို နှိပ်ပါ ပြီးရင် Right key ကိုနှိပ်ပါ. အစဉ်အတိုင်းနှိပ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. Left-Ok-Right အဲ့လို သွားပါမယ်.
ပြီးတာနဲ့ setting ထဲမှာ "System Menu" ကို တွေ့အောင်ရှာပါ တွေ့ရင် Ok ကိုနှိပ် ပေးလိုက်ပါ.
နောက်တစ်ခါ "Clean Derivative" ဆိုတာကို ထပ်ရှာပြီးတော့ Ok ကို ထပ်နှိပ်ပေးပါ. clean လုပ်နေတဲ့ အချိန်ခဏလေး စောင့်ပေးရပါမယ်. တစ်ခါတစ်လေ တစ်မိနစ်လောက်ကြာသလို တစ်ခါတစ်လေ နှစ်မိနစ်လောက် ကြာတတ်ပါတယ်.
နောက်တစ်ခါ "Clean Firms" ဆိုတာကို ထပ်ရှာပါ. တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ Ok ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ. သူလည်းပဲ Clean လုပ်နေစဉ်အချိန် ခဏလောက် စောင့်ပေးလိုက်ပါ.
အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် "Cancel" button ကို4ကြိမ်ဆက်တိုက် နှိပ်ပေးရပါမယ်.
ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင် printer ရဲ့ power ကြိုးကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ (power botton ကနေ မပိတ်မိပါစေနဲ့)
ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ပထမက ဖြုတ်ထားတဲ့ "flat ribbon cables" နှစ်ကြိုးကို main circuit board မှာ သေသေ ချာချာ ပြန် တပ်လိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးသွားရင် power ကြိုးပြန်ထိုးပြီးတော့ power button ကိုနှိပ်ပြီး printer ကို ဖွင့်ကြည့် လိုက်ပါ။
အဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါတစ်လေ printer screen မှာ ထုတ်မည့်စာရွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး setting ပိုင်း မှာလိုသလို ရွေးပေးဖို့ မေးတတ်ပါ တယ်. မေးထားတာကို ကိုလိုချင်တဲ့ setting အတိုင်း ရွေးပေးလိုက်ပါ. တစ်ခါတစ်လေ မမေးတတ်ပါဘူး.
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ printer က head က စပြီး အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်. အဲ့အချိန်မှာ printer ကို မပိတ်မိပါစေနဲ့. ခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါ. head အလုပ်လုပ်တာ ငြိမ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ခုနက ဖြစ်နေတဲ့ မှင်ပြဿနာနဲ့ error ဖြစ်သေးလား ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ.
Posted by Xai Yak at 09:25 No comments:
ပထမဦးဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ I-devices (ipod,ipad,iphone) ကို setting - general- about မှာ ကိုယ့်ရဲ့ IOS
ကို အရင် check ကြည့်ပါ 5.0.1 ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို သိပ်ခြာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ i-devices (ipod,ipad,iphone) ကို Shutdown လုပ်လိုက်ပါ။
Itunes က update ဖြစ်ရပါမယ် update မရှိသေးရင် ဒီမှာ
Redsn0w latest လိုအပ်ပါတယ် ဒီမှာ windows အတွက် ဒီမှာ MAC အတွက်။
Redsn0w ကို download လုပ်ပြီး Run တဲ့အခါမှာ Extra ကိုသွားပါပြီးတော့ Select IPSW ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးတော့ IOS အဟောင်းဖြစ်တဲ့ 5.0.0 ကို အောက်ပါတွင်ရွေးပြီး Download လုပ်ပါ။
ပြီးတော့ ဒီ IOS ကို Select လုပ်ပေးပါပြီးတော့ back ကိုပြန်နှိပ်ပါ။
ပြီးတော့ Jailbreak ကိုနှိပ်ပြီး Jailbreak နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာ ပြန်ပြီး I-devices ကိုပိတ်ပြီးတော့
Redsn0w ကနေ Extra မှာ Just boot ကိုပြန်နှိပ်ပေးပါ။
Posted by Xai Yak at 09:15 No comments:
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေခြင်တဲ့ လူကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ ဆိုပြီးတော့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ Google မှာ လိုက်ရှာပြီး ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ပြန်ရတာ ကိုယ်တောင်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ချင်တာနဲ့
အဆုံးထိတော့ မပြန်တော့ပါဘူး။ နာလည်းပေးပါ။
ကိုယ့်ကို သတ်သေခြင်တဲ့လူက သူ့ကိုကူညီပါဆိုပြီး အကူညီမတောင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့လဲ အကူညီမလိုခြင်လို့
မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ကိုသတ်သေတဲ့ လူအများကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ သေခြင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေ
တာမဟုတ်ဘဲ သူ့မှာခံစားနေရတဲ့ နာကြီးမှုကို ပျောက်သွားခြင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Suicide (ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်
သေ) ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးရမယ် ပြီးတော့ ဒီသတိပေးချက်တွေကို သေသေချာ
ချာလိုက်နာရပါမယ်။ (ဥပမာ- ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို စွဲလမ်းမိတယ်ဆိုရင် သူ့အကြောင်းကိုမေ့ပစ်
ဖို့နဲ့ သူနဲ့ပတ်သတ်တာတွေကို လွှတ်ပစ်လိုက်ပြီး လုံးဝကို မစဉ်းစားဘဲ မေ့လိုက်ဖို့ ) ဒီအချက်ကို ကိုယ့်ကို
Suicide လုပ်ခြင်နေတဲ့ စိတ်တွေဝင်လာရင်
If you're thinking about committing suicide, please read If You're Feeling Suicidal or call 1-800-273-TALK now! To findasuicide helpline outside the U.S., visit Befrienders Worldwide.
The World Health Organization ရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ လူပေါင်း ၁ သန်းနီးပါးဟာ
လူအများစု အထင်မှားမိကျတဲ့ Suicide အတွေး
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေ မယ်လို့ပြောတဲ့ လူတွေက တကယ်မလုပ်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတဲ့လူက တကယ်ကို အရှုးဘဲလို့ထင်ခြင်း။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေမယ်လို့ပြောတဲ့ လူကိုတားလို့မရဘူးလို့ ထင်ခြင်း။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတဲ့လူတွေက အကူအညီကိုမလိုချင်ဘူးလို့ ထင်ခြင်း
Suicide အကြောင်းကို ပြောခြင်းက လူတစ်ယောက်ယောက်ကို အကြံဥာဏ်တွေပေးနေတယ်လို့ထင်ခြင်း။
Posted by Xai Yak at 09:09 No comments:
Hack ချင်သူများ သတိထားပါ။ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးတာဖြစ်သလို ၀ါသနာပါတဲ့
မိတ်ဆွေများကိုလဲ သတိရလို့ပြောပြရအုန်းမယ် Yangon united FC (http://www.ygnutd.com/) ကို
၀င်လိုက်တာ hack ခံထားရတာတွေ့လိုက်ရတယ် ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာပါဘူး Yangon united (http://www.ygnutd.com/) က ပြန်ပြီး
recovery လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ Blinkhackergroup.net ဆီ
Download section မှာ download hacking tools ဆိုတာကို တွေ့လိုက်တယ် ဒါနဲ့ ချက်ချင်းဘဲ နှိပ်ပြီး (http://bhg.nazuka.net/dl4hktools.html) ကြည့်လိုက်မိတယ် ဒါနဲ့ ကြိုက်စရာလေးတွေ တွေ့မိရော Download မယ်လုပ်တော့ မှ Winspy Keylogger အကြောင်းကို သတိရမယ်တယ် ဒီ software ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ install လုပ်ဖို့ exe file ကို ထုတ်ပေးပါတယ် ဒီ exe file ကို ကိုယ့် hack ချင်တဲ့ လူရဲ့ Computer ထဲမှာ install လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ ဒီအတိုင်း ကြီး လူတစ်ယောက် ကို exe file ပို့လိုက်ရင် ဘယ်လိုမှ
install လုပ်မှာမဟုတ်သလို၊ စိတ်ဝင်စားမှာ လဲမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလို ကျွန်တော်တို့လို hacking ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေကျတော့ install လုပ်တာလဲ လွယ်လွယ်လေး လုပ်တက်တယ် ပြီးတော့ hack ဖို့ကို တအားစိတ်ဝင်စားနေတော့ ဘာမှကို မစဉ်းစားတော့ဘဲ install လုပ်မိတက်တယ် ဒီလို လုပ်မိတယ်ဆိုရင်
ဒီ winspy keylogger ရဲ့ exe file က ဒီ computer မှာ လုပ်သမျှကို screen shoot အကုန်လုံးကို ရိုက်ပြီး hacker ရဲ့ လက်ထဲကို ပြန်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် hacking ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို သတိထားဖို့လိုပါမယ်။
အထူးသဖြင့် hacking tools တွေက antivirus နဲ့ မထည့်ဘူးဆိုတော့ install လုပ်မယ်ဆိုရင်
antivirus ကို ပိတ်ပစ်လိုက်တက်တာ များတယ် ဆိုတော့ တကယ် hacking tools မဟုတ်ဘဲနဲ့
winspy keylogger ရဲ့ exe file ကြီးများသာ ဖြစ်နေရင်တော့ ရှိသမျှကုန်ပြီးပေါ့ဗျာ။
သတိထားကြပါ။ Hacking tools တိုင်းကို မယုံပါနဲ့။
Posted by Xai Yak at 09:05 No comments:
Connection manually မြန်အောင်လုပ်နည်း။လို့ပြောတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းထင်နေပါမယ်
ထူးထူးဆန်းဆန်း step by step နဲ့လုပ်ပြပြောပြရမဲ့ ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူး အမြဲတမ်း connection
နှေးတိုင်း လွှတ်ပေးတဲ့ Company ကြောင့်လို့ဘဲထင်နေမိတယ် တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်ဘက်က အားနည်းချက်လဲရှိတက်ပါတယ် အခု အချိန်က ဒီမှာပှုတော့ ကျွန်တော် Connection လဲအမြဲတမ်း လိုလိုနည်းနေတက်တယ် ဒါနဲ့ Router or modern ကို ပိတ်ပေး လိုက်တယ် ပြီးတော့ ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ် ဒါနဲ့ တော်တော်ကိုမြန်သွားတာ တွေ့ရတယ် သူလဲမောပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာဖြစ်မယ် ဒါကြောင့် တခါတလေကျတော့ သတိမထား မိဘဲ ညလဲဆက်တိုက်ဖွင့်ထားမိရင် ဖြစ်တက်ပါတယ် ဒါကြောင့် File တခုခုကို Download လုပ်တာအရမ်း ကြာတယ်ဆိုရင် Router or modern ကိုပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပြီးမှ
Download လုပ်ပါ အရင်ထက် အဆ အများကြီး မြန်ဆန်တာကို တွေ့ရမှာပါ။
Connection မြန်ဆန်အောင်လုပ်နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ်ယူထားတာကို က
နည်းတဲ့ connection ကြီးဖြစ်နေရင်တော့ ဘယ်လောက်မြန်အောင်လုပ်လုပ်မြန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်တိုင်ကြုံလာတဲ့ဟာကို ပိုစ့်အဖြစ်နဲ့ တင်လိုက်တာပါ။
သင်ချစ်တဲ့သူရှေ့မှာ သင့်ရဲ့ နှလုံးခုန်သံတွေက ပိုမြန်လာတယ်...
သင်ကြိုက်တဲသူရှေ့မှာ သင်ဟာ ပျော်ရွှင်တတ်တယ်...
သင်ချစ်တဲ့သူရှေ့မှာ ဆောင်းရာသီဟာ နွေဦးရာသီလိုမျိုး နွေးထွေးမှုခံစားရတယ်...
သင်ကြိုက်တဲ့သူရှေ့မှာ ..ဆောင်းရာသီဟာ လှပတဲ့ ဆောင်းရာသီဖြစ်လာတယ်...
သင်ချစ်တဲ့သူနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံရင်... သင်ဟာ ရှက်သွေးဖြာတယ်...
သင်ကြိုက်တဲ့သူ ဆိုရင်တော့... မျက်လုံးချင်းဆုံရင်...ပြုံးပြတတ်တယ်....
သင်ချစ်တဲ့သူရှေ့မှာ သင့်ရင်ထဲက စကားတွေ ဆွံ့ အ သွားတတ်တယ်...
သင်ကြိုက်တဲ့သူေ၇ှ့မှာ ဆိုရင် ပြောထွက်တယ်....
သင်ကြိုက်တဲ့သူရှေ့မှာ.... သင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းကို ပြသနိုင်တယ်...
သင်ချစ်တဲ့သူငိုနေရင်... သူနဲ့အတူ သင်လိုက်ငိုတယ်...
သင်ကြိုက်တဲ့သူကို မကြိုက်ချင်တော့ရင်...နားတွေမျက်စိတွေကို ပိတ်ထားလို့ရတယ်...
ဒါပေမဲ့ သင်ချစ်တဲ့သူကို မချစ်ချင်တော့ရင် မျက်စိ နားတွေ ပိတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့...အချစ်တွေက မျက်ရည်တွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး နှလုံးသားထဲမှာ ကျန်ရှိနေတတ်တယ်...
မူရင်း။ ။DIFFERENCE BETWEEN "SOMEBODY U LOVE" & SOMEBODY U LIKE"
Posted by Xai Yak at 09:04 No comments:
ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့လွန် ပညာရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များသည် အမှန်တကယ်တော်သော၊ တတ်သောသူများဖြစ်စေရန် ဆရာ၊ ဆရာမများပေါ်တွင် မူတည်နေ
လာမည့်ပညာသင်နှစ်မှစ၍ သိပ္ပံ၊ ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ်များအား ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်ထပ်တိုး သင်ကြားစေတော့မည်ဟု သိပ္ပံ၊ ဝိဇ္ဇာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ်များ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ပြောကြားသည်။ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက လားရှိုးမြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်သော ၄င်း၏ခရီးစဉ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အမှာစကားပြောကြားရာ၌ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
စက်မှုနိုင်ငံ ထူထောင်မည်ဆိုပါက နည်းပညာရှင်များ၏ အရည်အသွေး ပြည့်ဝမှုအပေါ်တွင် များစွာအခြေခံကြောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်းရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၆၁ ခုသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတွင် စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် နည်းပညာရှင် အရေအတွက် များစွာမွေးထုတ်ပေးရဦးမည်ဟု ဒုတိယသမ္မတက ပြောကြားသည်။ ထို့အပြင် တက္ကသိုလ်အသီးသီးက မွေးထုတ်ပေးလိုက်သော ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့လွန် ပညာရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များသည် အမှန်တကယ်တော်သော၊ တတ်သောသူများဖြစ်စေရန် ဆရာ၊ ဆရာမများပေါ်တွင် မူတည်နေကြောင်းလည်း ဒုတိယသမ္မတက ဆက်လက် ပြောကြားသွားသည်။
Ref: TheMirror, Photo: UCSY
Posted by Xai Yak at 08:46 No comments:
Wi-Fi ကို စီးပွားဖြစ် လွှင့်တဲ့သူများဟာ လောလောဆယ်တော့ Antamedia Hotspot software ကို အသုံးချပြီး လွှင့်နေကြပါတယ်။ တစ်ချို့က Ubuntu+Chillispot နဲ့ လွှင့်ကြတာလဲ ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Hotspot function ပါပြီးသား Router ၀ယ်ပြီး လွှင့်လည်း ရပါတယ်။ သူက နည်းနည်းကုန်ကျစရိတ်များပေမဲ့ Wi-Fi login, logout လုပ်ဖို့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ပေးထားတာထက် စာရင်တော့ တော်သေးတယ် ပြောရမှာပေါ့။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ့် Router မှာ DD-WRT Firmware ထည့်ပြီး Hotspot ဖြစ်သွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ DD-WRT Firmware ထည့်ပြီး CSP (Chillispot Service Provider) နဲ့ ချိတ်ဆတ်ပြီး Wi-Fi login page တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ Hotspotsystem.com က CSP တစ်ခုပါ။ သူ့ site မှာ register လုပ်၊ သူတို့ပေးတဲ့ setting တွေကို ကိုယ့် DD-WRT ထည့်ထားတဲ့ Router မှာ ထည့်သွင်းပေးရုံနဲ့ Pay Per Use Hotspot တစ်ခု တည်ထောင်နိုင်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 08:42 No comments:
ယခု အမေရိကန်ကွန်ဂရက်သည် အင်တာနက်၏အနာဂတ်ကို အကြီးအကျယ်သက်ရောက်စေမည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းရန် စဉ်းစားလျက် ရှိသည်။ အဆိုပါဥပဒေမှာ Stop Online Piracy Act ဟုခေါ်သည့် အွန်လိုင်းခိုးကူးမှုတားဆီးရေး အက်ဥပဒေပင် ဖြစ်သည်။
အမှန်မှာမူ ထိုဥပဒေသည် တရားမ၀င်(ခိုးကူး)လုပ်ငန်းများကို တားဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အဆိုပါဥပဒေသည် အင်တာနက်တွင် ရှိသော လူမှုမီဒီယာများနှင့် သုံးစွဲသူထုတ်လုပ်တည်းဖြတ်ထားသော အကြောင်းအရာများပါဝင်သည့် ၀ဘ်ဆိုက်များ (ဥပမာ YouTube) အစ ရှိသည့် ဆိုက်များကို အကြီးအကျယ်ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။ ၄င်းသည် အင်တာနက်တွင်ရှိသော အချို့သော အရေးကြီးနည်းပညာဆိုင်ရာ စနစ်များကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာအသစ်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
၀က်ဆိုက်များ ဆက်လက်၍ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စေရေးနှင့် လူတိုင်းဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် ကတိပြုသောအားဖြင့် Mozilla သည် အဆိုပါဥပဒေအနေဖြင့် အင်တာနက်၏ အခြေခံတည်ဆောက်မှုကို မဖျက်ဆီး မခြိမ်းခြောက်ပါဟူသော သေချာမှုကို လိုလားလျက်ရှိပါသည်။
ယခုအချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့သည် အချက်နှစ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ယခုအပတ်အစောပိုင်းတွင် ကျွန်တော်တို့သည် Facebook, Google, Twitter, E-bay, Yahoo နှင့် အခြားသော နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပူးတွဲစာထုတ်ပြန်ပြီး အဆိုပါဥပဒေကို တရားဝင်ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံအနှံ့တွင်ရှိသော လူထုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့် သတင်းစာများစွာတွင် ကြော်ငြာများထည့်သွင်းပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
(၂) အဆိုပါ ဥပဒေကို အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်တွင် စတင်ကြားနာသည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့တွင် အဆိုပါကိစ္စကို အများ စိတ်ဝင်စားစေရန်နှင့် လူထု၏သဘောထားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များသည် အဆိုပြုထားသောဥပဒေ အတည်မဖြစ်စေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းသော ပထမ ခြေလှမ်းများသာ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင် ပါဝင်လိုသည်ဆိုပါက Form တွင် Sign Up လုပ်ပါ။ Web ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပြုလုပ်သော ယခုလှုပ်ရှားမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့၏ လုံ့လကိုအားစိုက်၍ တားဆီးနိုင်မည့်နည်းလမ်းမှန်သမျှကို သင်နှင့်အတူ ရှာဖွေသွားပါမည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ယခုသတင်းကို သင်၏တိုင်းပြည်အနှံ့ လူအများသိအောင် ဖြန့်ဝေပေးပါ။
(https://donate.mozilla.org/page/s/SOPA?source=sopa_page ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်)
SOPA ရပ်တန့်စေရန်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် https://donate.mozilla.org/page/s/SOPA?source=sopa_page တွင်ရှိသော Form တွင် အမည်၊ အီးမေးလ်၊ နိုင်ငံထည့်သွင်းပြီး ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။
SOPA ၏ ပြဌာန်းချက်အပြည့်အစုံကို en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by Xai Yak at 08:41 No comments:
နှစ်သစ်ကျန်းမာရေးအထူးဆောင်းပါး(သို့)တားမြစ်အစားသောက် ၇ မျိုးထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
*You all have Happy Leisure-Pleasure-Treasure New Year 2010 !!!*
ကောင်းသောနှစ်သစ် ၂၀၁၀ မှာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့ အောက်ပါအစားအသောက် ၇ မျိုးကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကြေ
စည်သွပ်ဘူးတွေထုပ်ပိုးရာမှာ Bisphenol-A (ဘစ်ဖီနော-အေ)လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုပစ္စ
ည်းကို သံဖြူဘူးတွေရဲ့နှုတ်ခမ်းသားမှာ သုတ်လိမ်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒီဓာတုဒြပ်ပေါင်းဟာမျိုးဆက်ပွားကျန်
မှာမှ ခရမ်းချဉ်သီးတွေရဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဘစ်ဖီနော-အေ ပိုမိုရောက်ရှိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း-သံဖြူစည်သွပ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ ဖန်ပုလင်းတွေနဲ့လာတာတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။
ဒါပေမယ့် ယနေ့ခေတ်နွားမွေးမြူသူတွေက နွားတွေကို ကြီးထွားမှုမြန်ဆန်လာအောင် ပြောင်းဖူး၊ပဲပိစပ်စတဲ့ သီးနှံတွေကျွေးလာကြပါတယ်။အရွက်စားတဲ့နွားတွေရဲ့အသားမှာ အနှံစားတဲ့နွားတွေရဲ့အသားထက် ဘီတာကယ်ရိုတင်း(ဗိုက်တာမင်အေ)၊ဗိုက်တာမင်အီး၊အိုမီဂါသရီးအဆီများ၊ CLA လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးပြုအဆီများနဲ့ ကယ်လစီယမ်၊မဂ္ဂနီစီယမ်၊ပိုတက်စီယမ်စတဲ့ သတ္တုဓာတ်များပေါများစွာပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အနှံစားတဲ့နွားတွေမှာတော့ ဒါတွေနည်းပါးပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းတဲ့ပြည့်ဝဆီ(Saturated Fats)များ သာမန်ထက်ပိုမိုများပြားစွာပါဝင်
ဖြေရှင်းနည်း-စူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းတဲ့အမဲသားတွေမှာအဆိုပါနွား၂ မျိုးရဲ့အသားတွေကိုခွဲခြားတံဆိပ်ကပ်ပြီးရောင်းချကြပါတယ်။မတွေ့ရင် ဆိုင်တာဝန်ခံများကိုမေးနိုင်ပါတယ်။
PerfluoroOctanoicAcid(PFOA) လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဟာ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။မိုက္ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပေါက်ပေါက်တွေကို ပလတ်စတစ်အိတ်တွေထဲထည့်လိုက်ရင် အခြားစားစရာတွေထက်ပိုပြီးPFOAတွေကိုအငွေ့ပျံစေပြီး စုပ်ယူမှုပိုကောင်းကာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပိုမိုရောက်ရှိစေတယ်လို့ဆိုပါ
တယ်။ဒီပစ္စည်းရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ သားသမီးရရှိရေးကို နှောင့်ယှက်တယ်လို့ စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားပါတယ်။
အော်ဂဲနစ်နည်းနဲ့စိုက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အာလူးတွေဟာကြီးထွားချိန်မှာ မှိုသတ်ဆေးဖျန်းရလေ့ရှိပြီး အာလူးပေါ်ချိန်နီးရင်လဲ ပေါင်းသတ်ဆေးဖျန်းရပြန်ပါတယ်။ဒါတွေကို အော်ဂဲနစ်မဟုတ်တဲ့အာလူးတွေက အခြားသီးနှံတွေထက် စုပ်ယူထားကြလို့ တတ်နိုင်သမျှလျှော့စားသင့်ပါတယ်
ဖြေရှင်းနည်း-တတ်နိုင်ရင် အော်ဂဲနစ်အာလူးတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ဝယ်ယူစားသုံးပါ(သို့)ရေထဲမှာစိမ်ထားပြီး အနည်းဆုံး၅ ခါလောက်အချိန်ကြာကြာဆေးသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆယ်လမွန်ငါးတွေရဲ့ သဘာဝအရပင်လယ်မှာမကြီးပြင်းရဘဲ ဒီလိုမွေးမြူရေးအနေနဲ့မွေးထားရင် ကြက်ငှက်တွေရဲ့ အညစ်အကြေး၊ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်သတ္တုတွေ၊ပိုးသတ်ဆေးတွေကို အလိုအလျောက်စုပ်ယူမိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ ဗိုက်တာမင်ဒီပါဝင်မှုပမာဏကိုလည်
ဖြေရှင်းနည်း-Alaska Salmon လို့တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ငါးတွေကတော့ အကောင်းဆုံးသဘာဝငါးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် fresh Atlantic လို့ကပ်ထားရင်တော့ လုံးဝမ၀ယ်ပါနဲ့။ဒါဟာမွေးမြူရေးငါးသာဖြစ်ပါတယ်။အတ္တလန္တိတ်ရေပြင်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆယ်လမွန်ငါးဖမ်းခွင့်မပေးထားလို့ပါ။
နို့ထုတ်လုပ်သူများဟာ မျိုးရိုးဗီဇနည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားသောနွားကြီးထွားရေးဟော်မုန်း(recombinant Bovine Growth Hormone, rBGH)ကိုသုံးပြီး သူတို့ရဲ့နို့စားနွားတွေကိုနို့ပိုထွက်အောင်လုပ်ပါတယ်။ဒီဟော်မုန်းရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ နွားဆီကရောဂါပိုးများနဲ့ပြည်များ နွားနို့ထဲမှာပါလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေရှည်သောက်သုံးသွားရင် ဆီးကျိတ်၊ရင်သား နဲ့ အူမကြီးကင်ဆာများပါဖြစ်နိုင်ြေ
ဖြေရှင်းနည်း-နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင် rBGH-free, rBST-free ဆိုတဲ့လေဘယ်များပါတာတွေကို ရှာဝယ်ရင် စိတ်ချရပါတယ်။
``အသီးအနှံများ၏ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ထိတွေ့မှုအများဆုံးပြိုင်ပွဲ´´သာလုပ်ရင်ပန်းသီးပထမရမှာ သေချာပါတယ်။သာမန်ပန်းသီးတွေ၊အထူးသဖြင့်ကိုင်းကူးကိုင်းဆက်နည်းနဲ့ စိုက်ထားတဲ့ ပန်းသီးတွေဟာ ရောဂါပိုးမွှားဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်နည်းလွန်းလို့ ခဏခဏပိုးသတ်ဆေးဖျန်းရလွန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးနဲ့ ပါကင်ဆန်ရောဂါလို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်တဲ့ရောဂါဖြစ်ေ
Posted by Xai Yak at 08:38 No comments:
အမေရိကန် ကင်ဆာ အသင်းကြီးမှ ဖော်ပြထားတဲ့ ကင်ဆာရဲ့ ကနဦး လက္ခဏာ ၇ ခုကတော့ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်တယ်။
(၁) ဝမ်း-ဒါမှမဟုတ် ဆီးသွားသည့် အမူအကျင့် ပြောင်းလဲခြင်း
(၂) အနာပေါက်ခြင်း (Sore
(၃) မူမမှန်တဲ့ သွေးသွန်မှုဖြစ်ခြင်း (Bleeding) သို့မဟုတ်(ပြည်၊ အရိအချွဲ စသည်) ယိုထွက်ခြင်း (Discharge)
(၄) ရင်သား ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာရာတွင် အဖုအကျိတ်ဖြစ်ခြင်း (Lump)
(၅) အစာမကြေခြင်း (Indigestion) သို့မဟုတ် အစာမျိုရခက်ခဲခြင်း
(၆) ကြွက်နို့ (Wart) ဖြစ်လာခြင်း ဒါမှမဟုတ် မှဲ့ (Mole) တစ်ခုခုတွင် ထင်ရှား သိသာတဲ့ အပြောင်း အလဲ ဖြစ်ခြင်း
(၇) တကျီကျီချောင်းဆိုးခြင်း (Nagging Cough)၊ ဒါမှမဟုတ် အသံဝင်ခြင်း၊ အသံဩခြင်း (Hoarseness)
Posted by Xai Yak at 15:16 No comments:
၆။ အနည်းဆုံးခြောက်လစေ့စပ်ထားပြီးမှ လက်ထပ်ပါ။
Posted by Xai Yak at 15:12 No comments:
Posted by Xai Yak at 15:11 No comments:
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကကျွန်တော်သူငယ်ချင်းများနှင့် ကျောက်တော်ကြီးဘုရားဆီမီးပူဇော်ပွဲကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့သည်။ ဆီမီးများဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင်ထွန်းညှိထားသည်မှာ ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းလှပြီး စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းလှပေသည်။ထို့နောက်မကြာမီ အချိန်လေးအတွင်းတွင် စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ဖွယ် မြင်ကွင်းတစ်ခုကို မြင်တွေ့ရလိုက်ပေသည်။ ဖြစ်ပုံမှာ
လူတစ်ယောက် ရင်ပြင်တော်တွင် ဆီးမီးပူဇော်ရန် အလို့ငှာ မတ်တပ်ထအရပ်တွင် သူ၏ ခါးကြားတွင်ညှပ်ထားသော ပိုက်ဆံငါးထောင်တန်နှစ်ရွက် အလိပ်လိုက် ကလေး မှာအာက်သို့ ကျသွားလေသည်။ ထိုအခါ ပိုက်ဆံအလိပ်လေးကျသွားသောနေရာနားတွင် ထိုင်နေသောမိသားစုမှ မိန်းမဖြစ်သူသည်သူ့ ယောက်ျားအား လက်တို့ပြီး ပြလေသည်။ ထို့နောက်ယောက်ျားဖြစ်သူမှ ကောက်ယူပြီး ထိုမိန်းမအားပေးလိုက်လေသည်။ ကျွန်တော်လည်းဖြစ်စဉ်အား အစအဆုံး မြင်ပေရာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အဆုံးသတ်မည်ကို သိချင်သဖြင့် ဆက်လက်ပြီး စောင့်ကြည့်နေမိသည်။ ထို့နောက် ပိုက်ဆံကျသွား သူ သည်
နေရာသို့ပြန်လာပြီး ထိုင်လေရာ ပိုက်ဆံကျပျောက်ကြောင်းသိသဖြင့် ဆီမီးသွားပူဇော်ရာ လမ်း
တစ်လျှောက် ရှာလေသည်။ပိုက်ဆံကျပျောက်သူထိုင်နေသောနေရာမှာ ကောက်ယူလိုက်သော
မိန်းမ၏ နံဘေးကပ်လျက် တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပိုက်ဆံရှာသောအခါ ကောက်ယူလိုက်သော
မိန်းမသည် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပြီး ၀ိုင်းပြီးပင်ရှာဖွေပေးလိုက်သေးသည်။ ထိုအခါ
ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်သည်နှင့် ထိုမိန်းမကောက်ယူထားကြောင်း ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ တွင်ထည့်
ထားကြောင်း ပြောလိုက်သည်။ထိုအခါ ပိုက်ဆံယူထားသောမိန်းမသည် သူမယူကြောင်း သူကောက်ယူလိုက် သည်မှာ ဖယောင်းတိုင်ဖြစ်ကြောင်းအတင်း ငြင်းလေသည်။ သူ၏
ယောက်ျားလုပ်သူမှာ မယောင်မလည်နှင့် အပြင်သို့ ထွက်ခွာသွားလေသည်။ ပိုက်ဆံကျသွား
သောသူကလည်း ထိုမိန်းမအား ယူထားပါကပြန်ပေးရန် လမ်းစရိတ်မရှိတော့သောကြောင့်
ပြန်ပေးပါရန် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတောင်းဆိုသည်။သို့ရာတွင် ထိုမိန်းမသည် မယူကြောင်း အထပ်ထပ်ငြင်းကာ ထွက်သွားလေသည်။ ကျွန်တော့ကဲ့သို့ ပင်ဖြစ်စဉ်ကို အစအဆုံးမြင်တွေ့သူများလည်းရှိလေသည်။တွေ့မြင်ရသောသူများနှင့် ကျွန်တော်လည်း သနားဂရုဏာသက်ပြီး လမ်းစရိတ်အလို့ငှာ ကူညီလိုက်ရပေသည်။ပိုက်ဆံကျပျောက်သော
သူသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာသောလူတန်းစားမှ မဟုတ်နိုင်သလို ပိုက်ဆံကောက်ယူသွားသော
အမျိုးသမီးမိသားစုသည်လည်း ခပ်နွမ်းနွမ်းလူတန်းစား မှဟု အကဲခတ်မိသည်။ကျွန်တော်တစ်ခု
စဉ်းစားမိသည်။ထိုပိုက်ဆံနေရာတွင် ငါးထောင်တန်မဟုတ်ပဲ ငါးဆယ်တန်နှစ်ရွက် သို့ မဟုတ်
ငါးရာတန်နှစ်ရွက် ဆိုလျှင်ကော ထိုအမျိုးသမီးသည် ရိုးသားနိုင်မည်လော ဟုတွေးမိသည်။
လူလူခြင်း ကိုယ်ချင်းစားတရားတွေ ခေါင်းပါးလွန်းသညိကိုလည်း အံ့သြမိသည်။ယနေ့ခေတ်
ပိုက်ဆံတစ်သောင်းသည် သာမာန်မိသားစု ခြွေခြွေတာတာ စားသောက်လျှင် သုံးရက်ခန့်
စားသောက်လို့ အဆင်ပြေနိုင်သည်။သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဖြစ်ခဲ့လျှင်ဆိုသည့် အတွေးဝင်ခဲ့
သည်ရှိသော် ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိးမဖြစ်နိုင်။ပြီးတော့လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ် လုပ်ရန်
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေတွင် ဘုရားသို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။အဘယလာဘမုနိ ရုပ်ပွားတော်ရှေ့တည့်တည့် တွင် ဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသည့်
အဖြေကို ကျွန်တော်အခုအချိန်ထိ စဉ်းစားလို့ မရသေးပါ။စီးပွားရေးကြောင့်လား၊ ပင်ကိုယ်စိတ်
ဓါတ်အခံမကောင်းသောကြောင့်လား၊အခက်ခဲရှိသောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ လူအများကြားတွင်
ကိုယ်ကျင့်တရားကို အရှက်တရားဖြင့်လဲသွားခြင်းပေလား။ကျွန်တော့ အတွေးထဲတွင်
ငွေတစ်သောင်းနှင့် လူနှစ်ယောက်တို့သည် ချာချာလည်လျက်...........................................................
Posted by Xai Yak at 15:10 No comments:
Posted by Xai Yak at 15:06 No comments:
Posted by Xai Yak at 15:05 No comments:
Posted by Xai Yak at 15:02 No comments:
မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် facebook မှကူညီမည်
Facebook မှ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခြင်း၏ ဘေးအန္တရယ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆွေးနွေး အတိုင်ပင်ခံသည့် စနစ်ဖြင့် ကယ်တင် ကူညီသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ လူမှုရေးကွန်ယက် တစ်ခုဖြစ်သော Facebook တာဝန်ခံ Fred Wolens မှပြောကြားခဲ့သည်မှာ..
အသက်အန္တရယ်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်အထိ စိတ်ဓါတ်အင်အား ကျဆင်းနေသောသူများကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ကူညီပေးသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ လူဦးရေ သန်း800 ကျော် သုံးစွဲနေသော လူမူရေးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Facebook မှ မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေမည့် သဲလွန်စများ၊ အရေးအသားများကို တွေ့ရှိသူတိုင်း သတင်းပို့ ပေးနိုင်ပါသည်။ မိမိ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အနေဖြင့် အကူအညီမဲ့ ဖြစ်နေပြီး အသက်အန္တရယ်ရောက်နေသည်ကို သိရှိပါက သတင်းပို့ ပေးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည် အသက်အန္တရယ်ကို ထိခိုက်စေမည့် post များကို တင်ထားပါက အချိန်မီ သတင်းပို့နိုင်ပြီး တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခက်အခဲများအတွက် အားပေး ဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စများ ဖြစ်ပွားလာပါက facebook မှတိုက်ရိုက် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်အား ဆက်သွယ်ပြီး ကယ်တင် ဆွေးနွေး ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းဖြစ်ရပ်အတွက် သတင်းပေးပို့ပါက ပေးပို့သူ၏အမည်ကို လျို့ဝှက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အကူအညီမဲ့ ဖြစ်နေပြီး အသက်အန္တရယ်ရောက်နေသည်ကို သိရှိပါက သတင်းပို့ ပေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည် အသက်အန္တရယ်ကို ထိခိုက်စေမည့် post များကို တင်ထားပါက အချိန်မီ သတင်းပို့နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခက်အခဲများအတွက် အားပေး ဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စများ ဖြစ်ပွားလာပါက facebook မှတိုက်ရိုက် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်အား ဆက်သွယ်ပြီး ကယ်တင် ဆွေးနွေး ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ (သို့) ယင်းဖြစ်ရပ်အတွက် သတင်းပေးပို့ပါက ပေးပို့သူ၏အမည်ကို လျိုဝှက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Xai Yak at 15:01 No comments:
မိဘ ဆိုတာ သတ္တဝါ တိုင်းလိုလိုမှာ ရှိကြပေမယ့် မိဘက သားသမီး အတွက် တာဝန်ယူ၊ ပြုစု၊ သင်ကြားပေးတတ် တာတွေ ကိုတော့ လူအပါအဝင် တချို့ သတ္တဝါ တွေမှာပဲ တွေ့ရ တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုတာဝန်ယူ၊ ပြုစု၊သင်ကြားပေး တတ်တဲ့ အထဲကမှ ကာလအပိုင်း အခြားတစ်ခုရောက်ရင်တော့ တာဝန် တွေရပ်ပြီး သားခွဲတတ်ကြတာ ဓမ္မတာ ပါ။ သားမခွဲဘဲ တစ်သက်လုံးတာဝန် ယူတတ်တာတော့ "လူ" သတ္တဝါပဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ မိဘနဲ့ သားသမီး ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ကြရပါတယ်။ အဲဒီ ရေရှည် ဆက်ဆံရေး တွေထဲကမှငွေရေး ကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ဒီ ဆောင်းပါးမှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေး သွားပါ့မယ်။ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ့်ကို ရှည်ပါတယ်။
မိဘ ဒါမှ မဟုတ် သားသမီးတစ်ဦးဦး မဆုံးပါး မချင်း ဒီဆက်ဆံရေးက တည်ရှိနေမှာ ပါ။ ဆက်ဆံရေးပုံစံကလည်း ကာလ အပိုင်းအခြားကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေ တတ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲရမယ့် ဆက် ဆံရေးကို ဂရုမထားမိဘဲ မိဘဘက်က ဖြစ်ဖြစ်၊ သားသမီးဘက်ကဖြစ်ဖြစ်၊ နှစ်ဖက်စလုံးကဖြစ်ဖြစ် ပျက်ကွက် ခဲ့ရင် ဆက်ဆံရေးမှာ အဖု အထစ်တွေဖြစ်လာတော့တာ ပါပဲ။ ဆက်ဆံရေးပုံစံ ပြောင်း လဲရတတ်တဲ့ ကာလတွေ ကို သားသမီးတွေရဲ့ အသက်ပေါ်မူတည်ပြီး ၄ ပိုင်းလောက်ပိုင်းလို့ရပါ တယ်။
အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေး အရွယ်ကာလ၊ ၁၂ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အထိ လူငယ်အစပိုင်းကာလ၊ ၁၈ နှစ်နဲ့ ၂၅ နှစ် ကြား လူငယ်ဘဝ အဆုံးပိုင်းကာလနဲ့ အသက် ၂၅ နှစ်အထက် လူကြီးပိုင်း ကာလဆိုပြီး ခွဲခြားထားလို့ရပါတယ်။ အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးအရွယ်မှာ ဖြစ်တတ်တာက ၂ ခုပဲရှိပါတယ်။ ကလေးကို သိပ်ချစ်လို့ ဆိုပြီး ပူဆာသမျှ မရှိရှိတာနဲ့ ကြံဖန်ပြီး ဝယ်ပေး၊ အလိုလိုက်တာမျိုးရယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကျောင်းထား ပေးရင်၊ အစာကျွေးပေးရင် တာဝန် ကျေပြီပဲ၊ တခြားဘာမှမလိုပါဘူးဆိုပြီး ပစ်ထားတတ်တာမျိုးပါ။
မိဘတွေရဲ့ ငွေကြေးချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်းက အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တော့ ဘယ်လောက်ဖိုး ဝယ်ပေးသင့်တယ်၊ ဘယ်လောက် တော့ မကျော်သင့်ဘူးဆိုပြီး မပြောနိုင် ပေမယ့်မူလတန်းကလေးတစ်ယောက် ကို မုန့်ဖိုးတစ်နေ့ ၅၀ဝ၀-၁၀ဝ၀ဝ ပေးနေတာမျိုးကတော့ ဒီကနေ့ မြန်မာပြည် စံနှုန်းနဲ့ဆိုရင် ချစ်ရာ မရောက်ဘဲ နှစ်ရာရောက်နေမယ်ထင် ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ သူများတွေ ဝယ်စားနေတာကို ငေးကြည့်နေရတာ မျိုးလည်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
တကယ့် ကို မတတ်နိုင်လို့ မပေးနိုင်တာဆိုရင် လည်း အကျိုးအကြောင်း သေသေချာ ချာရှင်းပြပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပေးရင် ဒီခေတ်ကလေးတွေကနားမဝေး တတ်ကြပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာက ကလေးကိုတော့ ခြိုးခြံခိုင်းပြီး ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က သောက်စား၊ သုံးဖြုန်း နေရင်တော့ နားမဝေးပေမယ့် နား မဝင်နိုင်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ တတ်နိုင်တဲ့ မိဘတွေ၊ ဆွေမျိုး တွေရှိလို့ ကလေးတွေဆီမှာ မုန့်ဖိုး တွေ များနေရင်လည်း ကလေးကို သိမ်းခိုင်းထားတာထက် မိဘက စာရင်း လုပ်ပြီး သိမ်းထားပေး၊ ဖြစ်နိုင်ရင် လစဉ်အတိုးသဘောမျိုး နည်းနည်း ပါးပါးထပ်ဆောင်းပေး၊ သူဝယ်ချင် တာရှိရင်လည်း အဲဒီထဲက အချိုးအစား နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ် စိုက်ပြီးဝယ်ခိုင်း၊ ဒါဆိုရင် ငွေရဲ့အတိုးအပွားသဘော သဘာဝကိုပါ သင်ပေးပြီးသား ဖြစ် သွားပါမယ်။ ဘဏ်မှာအပ်ထားပေး တာမျိုးအထိ အဆင်ပြေရင်တော့ ပို ကောင်းတာပေါ့။ ကလေးလက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံများများ မထားတော့ အလွယ် တကူမပျောက်ဘူး၊ မသုံးမိဘူး။ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ တခြားသူတွေလည်း တာဝန်ပေါ့ တယ်။
တော်ကြာ ကလေးပိုက်ဆံ ပျောက်တာနဲ့ အိမ်ဖော်လေး အရိုက် ခံရတာ ဖြစ်နေပါဦးမယ်။ နောက်တစ်ပိုင်း ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၈ နှစ်ကြား ကာလကတော့ အခက် ခဲဆုံးကာလပါပဲ။ ကလေးလိုလည်း ဆက်ဆံလို့မရ၊ လူကြီးလိုလည်း တာဝန်မယူချင်တဲ့ ကာလပါ။ လှချင်၊ ပချင်၊ြွကားချင်၊ ဝါချင်တဲ့ စိတ်လေး တွေကလည်း ပေါ်။ အပြိုင်အဆိုင် ကလည်း များ။ လူပျိုပေါက်၊ အပျို ပေါက်။ ဇီးကွက်လို မျက်စိပြူးအောင် ရှာရတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာ ဆိုပိုဆိုးသေး။ ဘဝရဲ့အစ တက္ကသိုလ တွေ စဝင်ဖို့၊ လိုင်းခွဲဖို့ကလည်း ဒီ ကာလမှာ။ အဲဒီမှာ မိဘနဲ့ သားသမီး အားပြိုင်ကြတော့တာပါပဲ။ တွေ့ဖူးတဲ့ ဥပမာတစ်ခုပြောပါ မယ်။ သား ၁၀ တန်းဖြေမယ့်နှစ်မှာ မိဘကို ပူဆာတာက iphone ဝယ် ပေးရမယ်။ တစ်လ ၆ သိန်းတန် ဘော်ဒါထားပေးရမယ်တဲ့။ မိဘက ဘယ်လောက်တတ်နိုင်လဲ။ တတ်နိုင် တယ်ထားဦး ရလာတဲ့ iphone နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပြီး ကျောင်းစာမှာ ပျက် ကွက်ရင်ကော၊ ဒီလိုပါပဲ။
သူငယ်ချင်း တွေကို အားကျပြီး မွေးနေ့ကို ဟို တယ်မှာ တက်လုပ်ပေးကာ တစ်ည တည်းနဲ့ ၁၅ သိန်းအကုန်ခံလိုက်ရင် မိဘတာဝန်ကျေသွားပြီလား။ သေချာ တာကတော့ နောက်နှစ်မွေးနေ့မှာ ၂၅ သိန်းကုန်ဖို့ မှန်းထားရပါမယ်။ ဒီကိစ္စမျိုးကို ဖြေရှင်းတဲ့နည်းက လွယ်လွယ်လေးပါ။ မိဘနဲ့ သားသမီး အားမပြိုင်ကြပါနဲ့။ မိဘက ငါငွေကုန် ခံထားတယ်၊ နင့်ဘက်က တာဝန် ကျေဖို့ကြိုးစား ဆိုတာမျိုး သဘော မထားနဲ့။ သားသမီးဘက်ကလည်း အမေတို့က ဒီလောက်ပဲပေးတာ၊ သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ဒီလောက်သုံး တာ၊ သူတို့လို ပေးနိုင်လို့လားဆိုပြီး မဆိုးပါနဲ့။ ပြောရရင် ကိုယ့်မိသားစု တစ်လဝင်ငွေရဲ့ ဘယ်အချိုးအစားကို သားသမီးအတွက် သုံးနေပြီလဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားပါ။ မိသားစုဝင်ငွေက ၁၀ဝ ရှိတယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းအတွက် ပြန် ရင်းနှီးဖို့ကို ၂၅၊ အိမ်အသုံးစရိတ်က ၅၀၊ လှူဒါန်းဖို့က ၁၀၊ စုဆောင်းတာ က ၁၀၊ တခြားအထွေထွေကိစ္စတွေ အတွက်က ၅ ဆိုပြီး ရှိတယ်ဆိုပါ တော့။ အိမ်အသုံးစရိတ် ၅၀ ထဲကမှ ၂၅ က သားသမီးအတွက်ဖြစ်နေရင် စဉ်းစားရပါပြီ။
အဲဒီ ၂၅ ချိုးထဲမှာ တကယ်ကုန်တာက ကျူရှင်ဖိုး၊ ကျောင်း လခ။ တစ်နည်း ပညာရေးအတွက် ရင်းနှီးတာဆိုရင်တော့ ရင်းနှီးသင့်ပါ တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Iphone ကိစ္စ၊ သူ့လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးကို လစဉ်ပေးနေရ တာဆိုရင်၊စတိတ်ရှိုးသွားချင်လို့၊ ဖိနပ် ဝယ်ချင်လို့ စသည် စသည်တို့အတွက် ဆိုရင်တော့ ချင့်ချိန်ဖို့ ကောင်းပါပြီ။ မူလတန်းကလေးကို မုန့်ဖိုး ၅၀ဝ၀-၁၀ဝ၀ဝ ပေးလို့ ပျက်စီးတတ် သလို၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း အရွယ်တွေမှာ သူပူဆာသမျှ ဝယ်ပေး ပြီး၊ သူတောင်းသမျှပေးပြီး ကိုယ့်သား သမီးကိုယ် ဖျက်ဆီးလို့ရပါတယ်။ စာ ဖတ်ရတာ ညောင်းလို့ ကာရာအိုကေ သွားမယ်၊ အနှိပ်ခန်းသွားမယ်ဆိုပြီး ငွေ ၂၀ဝ၀ဝ ကျော်ကို တစ်ညတည်း နဲ့ သုံးခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ် ယောက်ရဲ့ အဖြစ်က ရင် လေးစရာပါ။ ဒီလိုသာ သွားနေရင် ကူးစက် ရောဂါကိစ္စ၊ မူးယစ် ဆေးဝါးကိစ္စတွေပါ ငြိ သွားလို့ကတော့သား သမီးရဲ့ အသုံးစရိတ် အချိုးက ၂၅ က နေ ၈၀-၉၀ အထိ တက်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ တွေးပူထား ပါ။
အစကတည်းက အား မပြိုင်ခဲ့ရင် ဒီလိုအဖြစ်တွေ ကလည်း ကင်းဝေးပါလိမ့် မယ်။ တစ်နည်း တူညီတဲ့ ပန်းတိုင်ရှိကြရင် ဒီလိုမဖြစ်ပါ ဘူး။ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ နားလည်မှုရှိကြရပါမယ်။ ဒီနှစ် အဖို့ ငါတို့မိသားစုရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ။ ဒီရည်မှန်း ချက်ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ဘယ် လိုသွားကြမလဲ၊ ဘယ်သူတွေက ဘာတာဝန်ယူမလဲ၊ ဒီအတွက် ဘယ် လောက်ကုန်ကျမလဲ၊ ဆွေးနွေးတိုင် ပင်ရပါမယ်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာဟာ ငွေပစ်ပေးတာ၊ ငွေကြိုက်သလောက် ယူသုံးခိုင်းတာထက် ပိုပြီးအချိန်ကုန်ပါ လိမ့်မယ်။ အဓိကအချက်က အချိန် ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဆွေးနွေးဖို့အချိန် မရှိဘူး၊ ငွေရှာဖို့ အချိန်တောင် မလောက်ပါဘူးဆိုရင် အဲဒီငွေရှာတာ ကရော ဘယ်သူ့အတွက်လဲ ပြန်မေး ကြည့်ပါ။ တစ်ပတ်မှာ ၁ နာရီ၊ ၂ နာရီလောက်တောင် သားသမီးနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် အချိန်ပေးဖို့ မဖြစ် နိုင်ရင်တော့ ခင်ဗျားရှာတဲ့ငွေဟာ လည်း သားသမီးကို ဖျက်ဆီးဖို့သက် သက်ဖြစ်နေမလားပဲ။ ငွေက အစား ထိုးလို့ရပါတယ်။
အချိန်ပေးတာက အစားထိုးလို့မရပါဘူး။ မိဘမေတ္တာကို အချိန်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ငွေနဲ့ ပုံမဖော်မိပါစေနဲ့။ အဖေပြောပြဖူးတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဟာ တန်ဖိုးကြီးကြီးနဲ့ ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ကစား စရာတွေထက် သားသမီးတွေအတွက အမှတ်တရ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သားသမီးတွေဘက်ကလည်း ငွေတောင်းဖို့၊ ရစ်ဖို့ပဲ မစဉ်းစားဘဲ ကိုယ့်မိဘအခြေအနေ၊ အခက်အခဲကို နားလည်ပေးဖို့ပါ။ မိသားစုတာဝန်ဆို တာ မိဘတွေဆီမှာပဲ ရှိတာမဟုတ်ဘဲ သားသမီးတွေဆီမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ပညာရေး ရင်းနှီးမှုလို ငွေကြေးကို သုံးစွဲတာမဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် အပြိုင်သုံးနေရင်း ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေ တည်ဆောက်နေချိန်မှာ အဖိုးတန် အချိန်တွေကို မဖြုန်းမိစေဖို့ပါ။ ပညာ သင်ပြီး ပညာတွေတတ်တော့ ဘာလုပ် မှာလဲလို့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီး မပြောပါနဲ့။ တကယ်တတ် အောင်သင်ထားပါ။ သုံးပါရစေဆိုပြီး လာခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ပညာ တတ်တယ်ဆိုတာကို အတန်းအောင် တာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မတိုင်းနဲ့ ပေါ့။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကိုယ်တတ် နိုင်သလောက် မိသားစုတာဝန်တွေကို ယူပေးဖို့ပါ။ အကြောင်းတစ်ခုခု ကြောင့် မိဘတွေ စီးပွားမရှာနိုင်ရင် တောင် ကွင်းဆက်မပြတ်တော့ဘူးပေါ့။ လူငယ်ဘဝရဲ့ အဆုံးသတ် ၁၈- ၂၅ နှစ်ကြားက ကာလတွေမှာ တချို့ တလေဆိုရင် အိမ်ထောင်တောင်ကျ နေပါပြီ။ အိမ်ထောင်မကျသေးရင် တောင် လက်တွဲဖော်လေးတွေနဲ့ပါ။ တချို့က လုပ်ငန်းခွင်မှာ။ တချို့က ပညာသင်တုန်း။ ဘဝပေးအခြေအနေ အရ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပါ။ ပုံစံတွေသာ အမျိုးမျိုးကွဲနေတာ သေချာတာက တော့ ငွေကြေးလိုအပ်မှု ပိုများလာ တတ်ကြတာပါပဲ။ ကျားကြီးတော့ ခြေ ရာလည်း ကြီးမှာပေါ့။ အရေးကြီးတာ က ခြေရာပဲကြီးပြီး ခန္ဓာကိုယ် အလိုက် သင့်ကြီးမလာရင် လမ်းလျှောက်လို့ မရပါဘူး။ ဒီကာလတွေမှာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ လူငယ်တွေထဲက တချို့ ဟာ ကိုယ့်ဝင်ငွေကို မိဘဆီအပ်ပြီး လိုသလောက် ပြန်တောင်းသုံးတတ် တာ ရှိပါတယ်။ (အပ်တာထက် ပြန် တောင်းတာက များချင်လည်း များနေ တတ်ပါတယ်)။
တချို့ကတော့ ပြန် မအပ်ဘဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်သုံးတယ်၊ ပိုလည်းမပေးဘူး။ လိုလည်းမတောင်း ဘူး။ ခပ်ရှင်းရှင်းပေါ့။ စနစ်နှစ်မျိုးစလုံး မှာ ကောင်းကွက်ရော ဆိုးကွက်ပါ ရှိနေပေမယ့် တစ်နေ့ကျရင် ဘဝထဲ လျှောက်လှမ်းရတော့မှာမို့ ကိုယ့်ဝင် ငွေ ကိုယ်ချင့်ချိန်ပြီး ကိုင်သုံးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အလေ့အကျင့် လည်း ရတာပေါ့။ သိတတ်လို့ မိဘ ကို ထောက်ပံ့ချင်ရင်လည်း အချိုး အစားတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး ထောက်ပံ့ လို့ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အရင်းအနှီး၊ ကျူရှင်အတွက် လုံးခနဲ ငွေလိုအပ်လာတာမျိုးအတွက်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မိဘတို့ဝတ္တရားပေါ့။ ဒီ နေရာမှာ မိဘရော၊ သားသမီးဘက် ကပါ စဉ်းစားဖို့က သားသမီးတစ်ဦး တည်းရှိတာလား၊ တခြားသားသမီး တွေရှိခဲ့ရင် သူတို့အတွက်ရော ဆိုတာ ပါ။ သားကြီး မလေးရှားသွားဖို့ကို အိမ်ပေါင်ပြီး လွှတ်လိုက်တာ၊ သမီး အငယ်အတွက်ကျတော့ ဘာမှမကျန်၊ သားကြီးကလည်း မလေးရှားက ပြန် လာပြီး မိန်းမယူသွားတယ်ဆိုတာမျိုး တွေမဖြစ်စေဖို့ပါ။ တစ်ဦးတည်းသော သား၊ သမီးဆိုရင်တော့ ချစ်သမျှ ပုံအော ချင်လည်း အောပေါ့။
အသက် ၂၅ နှစ်အထက် လူငယ်ဘဝ အဆုံးသတ်နဲ့ နောက်ပိုင်း လူလတ်၊ လူကြီးဘဝတွေမှာလည်း မိဘနဲ့ သားသမီး ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စတွေက ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းနဲ့ ရပ်တည်တာရှိသလို၊ မိဘ လက်ငုတ်လက်ရင်း လုပ်ငန်းနဲ့ ရပ် တည်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ မိဘ လက်ငုတ်လက်ရင်းလုပ်ငန်းနဲ့ ရပ်တည်တာမျိုးမှာ ထုံးစံအတိုင်းတစ်ဦး တည်းသော သားသမီးတွေအတွက်က သိပ်ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် တစ်ဦး ထက်ပိုလာရင် မိဘရှိစဉ်ကတည်းက ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိခဲ့ရင် မိဘတွေ လည်း မရှိရော မောင်နှမတွေကြားမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲစရာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါ တယ်။ ဒီတော့ မိဘရှိစဉ်မှာကတည်းက ဘယ်သူကတော့ ဘယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်၊ ဘယ်သူက ဘယ်အချိုးအစား နဲ့ယူ စသည်ဖြင့် ခွဲဝေပေးထားနှင့်ရင် နောင်ရေး စိတ်အေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ သားသမီးတွေဘက်က လိုအပ်နေတတ်တာ တစ်ခုကို တင်ပြ လိုပါတယ်။ တချို့မိဘတွေက ပုံမှန်ဝင် ငွေလေးနဲ့ စားနိုင်သောက်နိုင်ရှိမယ်၊ တချို့ဆို သားသမီးထက်တောင် ဝင် ငွေကောင်းချင် ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ငါ မပေး၊ မကျွေး လည်း စားနိုင်တာပဲဆိုပြီး ပြန်လှည့် မကြည့်ဘဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့ မိဘဆို တာ သူ့ဘာသာသူ ဘယ်လောက် တတ်နိုင်တတ်နိုင် သားသမီးက ဝယ် ပေးလာတဲ့ တစ်ရာတန် သရက်သီး တစ်လုံးကို စားရရင် ပိုချိုတတ်ပါ တယ်။ သားသမီးတွေ အလိုက်သိ တတ်ကြဖို့ပါ။ မိဘတွေဘက်ကလည်း အလိုက်မသိတတ်တာလည်း ရှိတတ် ပါတယ်။ သူ့မိဘက တတ်နိုင်တာပဲ ဆိုပြီး ယောက္ခမဘက်က လှည့် မကြည့်တာမျိုး။ သူ့ယောက္ခမက သူဌေးပဲ၊ မိဘက လှည့်မကြည့်တာ မျိုးတွေပါ။ အထူးသဖြင့် မွေးချင်းများ ရင် ဆိုးတဲ့သား၊ ပါးရှားတဲ့ သမီးကို စွန့်ကြဲပြီး လိမ္မာတဲ့၊ တတ်နိုင်တဲ့ သားသမီးကျတော့ တတ်နိုင်သားပဲ ဆိုပြီး မပေးတတ်၊ မကျွေးတတ်တာ ပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ်ပေး ရင် ကိုယ့်သားသမီး မျက်နှာရတာ ပေါ့။
အိမ်ထောင်ကျပြီးပြီဆိုရင် သူစိမ်း ဖက်နေပြီမို့ ကိုယ့်သားသမီးတွေက မမြော်မြင်ရင်တောင်မှ သားမက်၊ ချွေးမတွေကမြော်မြင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ကိုယ့်မှာသားသမီးတစ်ယောက် ထက်ပိုနေရင် အတတ်နိုင်ဆုံး မွေးအ တူ၊ ကျွေးအတူဖြစ်အောင် စီမံပေးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ငိုတတ်တဲ့ ကလေး နို့ပိုစို့ရတယ်ဆိုတာ မိဘမစစ်မှ ဖြစ် တာပါ။ မိဘစစ်ရင် မငိုတတ်တဲ့ ကလေး၊ ငိုဖို့တောင် အားမရှိတော့တဲ့ ကလေးကိုလည်း နို့တိုက်မှာပါ။ ဒီတော့ အချုပ်ဆိုရရင် မိဘနဲ့ သားသမီးဆိုတာ ရှိနေသမျှ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားက ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုတာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ရှိနေမှာမို့ တစ်ဖက် နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် မေတ္တာ စေတနာထားရင်း ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေအောင် ကြိုးစားကြရင်ဖြင့် အထူး အထွေ ပြဿနာမရှိနိုင်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
written by ဒေါက်တာ ဌေးအောင်
Posted by Xai Yak at 15:00 No comments:
ပထမအကြိမ်ဝင်းဒိုးအတက်နှေးသည်ကို စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်လိုက်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ဖြစ်မလာစေရန် ကွန်ပြူတာကိုလုံးဝ shut down မချပါနှင့်တော့။ ၀င်းဒိုးအတက်မစောင့်ရတော့ပါ။
စက်သုံးနေစဉ် blue screen တက်လာပါက ပြန်ကန်ချလိုက်ပါ။ တစ်ခါ မက နှစ်ခါမက တက်တက်လာပါကကွန်ပြူတာ s
creen ကို သဘောင်္ဆေး အမည်းသုတ်လိုက်ပါ။ blue screen တက်လာသည်ကို မမြင်နိုင်တော့ပေ။
ဒေတာ ထည့်သွင်းမှု ချောမွေ့စေရန် Hard disk အတွင်းပိုင်းအထိ အိုကီ ဆပ်ပြာမှုန့်ဖြင့် မကြာခဏတိုက်ချွတ်ပေးပါ။ လိုအပ်ပါက အစွန်းချွတ်ဆေး နှင့် ဖားဥကျွတ်ဆေးပါ သုံးပေးပါ။
ကွန်ပြူတာ တက်မလာဘဲ အသံမြည်နေတတ်ခြင်းမှာ မန်မိုရီကတ်လွတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်မပူပါနှင့် Super Glue သုံးပြီး နောက်ဘယ်တော့မှ လွတ်လို့မရအောင် ကပ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်လျှင် သံနှင့်ရိုက်ပြီး သော့ခတ်ထားလိုက်ပါ။
CPU heat မတက်စေရန် ကွန်ပြူတာဖင်ကို ရေစိမ်ပြီးသုံးပါ။ လိုအပ်ပါက သုံးသူကိုယ်တိုင်ပါ စိမ်ကောင်းစိမ်ရ လိမ့်မည်။ ရေစိမ်လို့မှ အဆင်မပြေလျှင် ရေခဲတိုက်ထဲ သွားသုံးပါ။
ကွန်ပြူတာကို ပုံမှန်အပူချိန်ထက် ပိုမမြင့်ပါစေနှင့်။ အပူချိန်ကြီးလာပါက ရေခဲဝတ်အုပ်ပေးပါ။ သို့မှသာ ကွန်ပြူတာတုပ်ကွေးမ၀င်မှာ ဖြစ်သည်။
အပူချိန်မြင့်နေသော ကွန်ပြူတာကို လေတိုက်ထဲမထားပါနှင့်။ တတ်နိုင်သမျှ လုံလုံခြုံခြုံ နွေးနွေးထွေးထွေးနေပါစေ။ ပလတ်စတစ်အိတ်နှင့်ထုပ်ထားပါ။ တိပ်နှင့်ကပ်ထားပါ။ အခြေအနေပေးပါက ဖီနိုင်း ပရော်ပါ နော်လမင်း မပါသော ဖလူဇာကို တစ်နေ့သုံးကြိမ် တိုက်ပေးပါ။(ရေအေးဖြင့်သာတိုက်ပါ) ဗိုင်းရပ်စ် ၀င်မ၀င် စစ်ရန် အန်တီဗိုင်းရပ်စ်ကိုသုံးပါ။ လိုအပ်လျှင် အန်တီဗိုင်းရပ်စ်၏ ယောကျာ်း အန်ကယ်ဗိုင်းရပ်စ် ကိုပါ ခေါ်ပြီးရှာခိုင်းပါ။
အန်တီနှင့် အန်ကယ် ဗိုင်းရပ်စ်လင်မယားမှ ကွန်ပြူတာတွင် ဗိုင်းရပ်စ် ၊ ပိုးကောင်၊ ကုတ်ကမြင်းများ ၀င်ရောက်နေသည်ကို အချက်ပြလျှင် အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ချက်ချင်း ဇာဂနာ ဖြင့် ကလော်ထုတ်လိုက်ပါ။ ပိုသေချာစေရန် ပုရွက်ဆိတ်ဆေး ၊ ကြမ်းပိုးဆေး၊ ခြဆေး များလည်း ထည့်ပေးပါ။ အပတ်စဉ် ခြင်နိုင်ဆေး မှုတ်ပေးပါ။ကွန်ပြူတာအနီး ခြင်ယင် ပိုးမွှားများမလာရောက်စေရန် ခြင်ထောင်ချထားပေးလျှင်လည်း အဆင်ပြေပါမည်။
ကွန်ပြူတာအသုံးများပြီး motherboard လောင်ပါက fatherboard ပြောင်းတပ်ပါ။ ထို့နောက်မှ တစ်ဆင့် sonboard ၊ daughterboard ၊ စသဖြင့် ဆွေမျိုးစုံအောင်တပ်ပါ။ တစ် board မဟုတ် တစ် board နှင့် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘုတ်မှ အဆင်မပြေပါက မော်တော် ဘုတ် တပ်ကြည့်ပါ ။ အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါသည်။
မိမိကွန်ပြူတာကို အခြားတစ်ဦး မကိုင်စေရန် system ပုံး ကိုသွားလေရာ ဖြုတ်ပြီး သယ်သွားပါ။ laptop ကွန်ပြူတာဆိုပါက စိတ်အချရဆုံးနည်းလမ်းမှာ သေ့ာတပ်ပြီး ခတ်ထားပါ။ သတိ မူရင်းသော့ မပျောက်ပါစေနှင့်။
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး လို့ယူဆရသူ တစ်ဦးဟာ ယဉ်များအလွန် ကြပ်လေ့ရှိတဲ့ လမ်းပေါ်သို့ မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့တာကြောင့် အခုဆေးရုံတင်ထားရကြောင်း တရုတ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ သတင်းစာတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မိုးပျံလမ်း Kallang-Paya Lebar နှင့် the Pan-Island အဝေးပြေးလမ်း Sims လမ်းမကြီးတို့ဆုံရာနေရာသို့ ခုန်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ အိမ်ပေါ်လုပ်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်မည်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ယင်းမိန်းကလေးဟာ ခုန်မချခင် Katong Shopping Centre ရှိ အိမ်အကူအလုပ်သမား ရှာဖွေပေးရေးအေဂျင်စီမှ ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်မြင်များ၏ပြောပြချက်အရ သူမဟာ မိုးပျံလမ်းရဲ့အစွန်းကပန်းခင်းပေါ်မှာ မက်တက်ရပ်ပြီး လက်တွေကိုဆန့်တန်းကာ အောက်ကိုခုန်ချတာ လို့သိရပါတယ်။
တက်စီမောင်းသူတစ်ဦးမှ မိန်းကလေးကို လမ်းဘေးဖယ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအမျိူးသမီးဟာပြုတ်ကျလာတဲ့ အချိန်မှာသစ်ကိုင်း တစ်ကိုင်းပေါ်ကို တစ်ဆင့်ပြုတ်ကျပြီး သစ်ကိုင်းလည်းကျိုးကျခဲ့ပါတယ်။ သစ်ကိုင်းပေါ်က တဆင့် ကျလာခဲ့တဲ့အတွက် အရှိန်အနဲငယ်ကိုလျော့ ပါးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လမ်းမဘေးက ကားတွေလမ်းမကြီးပေါ်ကနေ အရေးပေါ်ဘေး ထိုးထားဖို့ နေရာလေးပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာပြီး ညာဖက်လက်နဲ့ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ Tan Tock Seng ဆေးရုံကိုသယ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ ဝေဒနာများခံစားနေရသော်လည်း သတိတော့ကောင်းစွာရနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုအခု အရေးပေါ်ဆောင်မှာ ထားပြီးလုံးဝလှုပ်ရှားခွင့်မပေးထားပါဘူး။
အဲဒီလို မလုပ်ခင်မှာ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တစ်ခြားအိမ်အကူအမျိုးသမီးတွေကိုပြောပြခဲ့ တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်အဲသည် လိုဆန္ဒရှိနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ မပြောခဲ့ပါဘူး။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ မြန်မာမိန်းကလေးများ အမြင့်မှ ခုန်ချပြီး သေကြောင်းကြံမှုဟာ အစဉ်အလာတစ်ခုလို ဖြစ်လာနေပြီး မခိုင်သင်ဇာ နှင့် မယဉ်ငြိမ်းပွင့် ပြီးလျှင် ယခုမိန်းကလေးမှာ တတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။
@ Myanmar Express Group
Posted by Xai Yak at 14:38 No comments:
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ကာရိုးဘီလူးငှက်ကို အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်အင်တာနက် သုံးစွဲသူ တော်တော်များ များ မြင်တွေ့ပြီး သုံးစွဲနေကြပါပြီ။ ပြည်တွင်းမှာ မြန်မာပြည် ISP တွေရဲ့ Traffic Shaping ကြောင့် Gtalk နှင့် Gmail ကိုသုံးစွဲဖို့ အချိန်များစွာ စောင့်ရပါတယ်။ Karoolark လို့ခေါ်တဲ့ ကာရိုးဘီလူးငှက်က ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Gtalk ကို အချိန်များစွာမပေးရဘဲ www.karoolark.com မှာ login ၀င်ပြီး သုံးစွဲလို့ရသွားပါတယ်။ Karoolark Server ဟာ တောင်အာရှအတွက် Server တစ်လုံး ထိုင်ထားတာကြောင့် မြန်မာအပါအ၀င် အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကနေ လျင်မြန်မြန်ဆန်စွာ သုံးစွဲနိုင်လိ့မ်မယ်လို့ Karoolark ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ မူလ Google Talk Client လောက်တော့ Features တွေ မစုံလင်ပေမဲ့ သုံးလို့တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ လီမွန်ချိုးငှက်လို့ခေါ်တဲ့ www.lemondove.com ဟာလည်း Gmail ကို သုံးစက္ကန့်လောက်အတွင်းမှာပဲ ပွင့်လာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ မူလ Gmail မှာလို Features တွေအစုံအလင် မပါဝင်ပေမဲ့ အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းတို့ကိုတော့ ချောမွေ့မြန်ဆန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Gmail ကို ပိုပြီးမြန်ဆန်လိုချင်ရင်တော့ Gmail ရဲ့ Setting အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီး IMAP ကို ဖွင့်ထားဖို့ Karoolark က အကြံပြုထားပြန်ပါသေးတယ်။
Posted by Xai Yak at 11:02 No comments:
သင့်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ နိုင်ငံခြားဖုန်းတွေဆီ SMS ပို့ဖို့ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားဖုန်းတွေဆီကနေ SMS အ၀င်လက်ခံဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါသလား။
Internet တဆင့် US phone number ကိုအသုံးပြုပြီး အခမဲ့ messaging ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Service တစ်ခုအကြောင်း ပြောပြလိုပါတယ်။
www.pinger.com/textfree ကိုသွားပြီး Signup လုပ်ရအောင်။
Username , Password နဲ့ သင့် email လိပ်စာကိုဖြည့် ၊
Security code ကိုမှန်အောင်ဖြည့်ပြီးရင် Create ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်တဆင့်မှာတော့ zip code တောင်းပါလိမ့်မယ်။ http://www.mongabay.com/igapo/ ကနေ သင်နှစ်သက်ရာ US zip code တစ်ခု ရှာပြီး ဖြည့်လိုက်ပါ။ နောက် Gender နဲ့ Age ကိုဖြည့်ပြီး Find ကိုနှိပ်။
ဒါဆိုရင် သင့်အတွက် US phone number ၁၀ ခုကို List လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲကမှ သင်ကြိုက်တဲ့ နံပါတ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
သင့်နံပါတ်ကို Option ကနေတဆင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Google Account verification အတွက်လည်း ဒီဆားဗစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (country မှာ United States ကိုရွေးပေးရပါမယ်။ )
တစ်ခုသိထားရမှာက တစ်လအတွင်း Login မ၀င်ဖြစ်ခဲ့ရင် Signup လုပ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို အသုံးပြုလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပဲ နောက်နံပါတ်တစ်ခုကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ .. သင့်စိတ်ကြိုက် US ဖုန်းနံပါတ်တွေ ရွေးချယ်အသုံးပြုကြရအောင် ...
Posted by Xai Yak at 10:50 No comments:
စာဖတ်သူမှာ ကွန်ပျူတာရှိမယ်၊ အင်တာနက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကန် ဖုန်းတစ်လုံး အခမဲ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ စာဖတ်သူ အတွက် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် အမေရိကန်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို အခမဲ့ ရရှိမှာပါ။ တကမ္ဘာလုံးကနေ ကိုယ့်ဆီကို ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ ဖုန်းမြည်သံ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ နားကျပ်လေးနဲ့ ပြောရုံပါပဲ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာ မရေးသေးခင် သဘောတရားကို အရင်ရှင်းပြပါရေစေ။ အင်တာနက်မှာ SIP Protocol ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်။ သူက အင်တာနက်ပေါ်မှာ အသံတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ချောချောမောမော စီးဆင်းနိုင်အောင် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Protocol ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ SIP Protocol ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Software တွေကို SIP Client လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ Software တွေ အားလုံးကိုတော့ SoftPhone (Software Phone) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အများသိတဲ့ Skype? Pfingo တို့ဟာလည်း SoftPhone တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က SIP Protocol ကို အသုံးပြုထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ SIP Protocol ကို အသုံးပြုတဲ့ Software တွေကို နမူနာပြောရရင် ExpressTalk တို့ XLite တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အတိုကောက်အနေနဲ့ SIP SoftPhone လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ SIP Softphone တင်ပြီးသွားရင် SIP account တစ်ခုကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းဆီမှာလည်း SIP SoftPhone ရှိမယ်၊ SIP account ရှိမယ်ဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ ဖုန်းပြောလို့ရပါပြီ။ Gtalk နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖုန်းပြောသလိုပါပဲ။ Gtalk ဆိုရင်လည်း သူ့ကွန်ပျူတာမှာ Gtalk တင်ထားမှ၊ သူ့မှာလည်း Gtalk account ရှိမှ၊ သူကလည်း Online ဖြစ်ဦးမှ၊ Connection ကလည်း ကောင်းဦးမှ ဖုန်းပြောလို့ ရသလိုပါပဲ။ SIP SoftPhone တွေဟာလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။
SIP Phone တွေက အားနည်းချက်ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခေါ်ဆိုတဲ့အခါ username နဲ့သာ ခေါ်ဆိုခွင့် ရတာပါ။ အဲဒီလို username အစား ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု Free ပေးတဲ့ Service ကလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိနေပါပြီ။ တစ်နည်းအားဖြင့် username နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို တွဲပေးလိုက်တာပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်အတွက် အမေရိကန် ဖုန်းနံပါတ်ရသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကို တစ်ယောက်ယောက်က ခေါ်ဆိုလိုက်ရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာတင်ထားတဲ့ SIP SoftPhone က Alarm ပေးပါလိမ့်မယ်။ နားကျပ်လေးနဲ့ ဖုန်းပြောရုံပါပဲ။
၁။ www.callcentric.com ကိုသွားပြီး Sign Up လုပ်ပါ။ Sign Up လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့် email ဆီကို Verification mail ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ verification mail မှာပါတဲ့ link ကို နှိပ်ပေးပါ။ သူက အချက်အလက်တွေ ထပ်တောင်းပါလိမ့်မယ်။ City, Zip code စသည်ဖြင့်ပါ။ U.S မှာရှိတဲ့ မြို့၊ State၊ Zip code စတာတွေကိုပဲ ထည့်ပေးပါ။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ့်မှာ callcentric account တစ်ခု ရသွားပါလိမ့်မယ်။ Register လုပ်တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ username နဲ့ call centric က ထုတ်ပေးတဲ့ call centric number၊ call centric မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ IP တွေကို သေချာ မှတ်ထားပါဦး။
၂။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ phone.ipkall.com ကိုသွားပါ။ Register လုပ်လိုက်ပါ။ SIP username နဲ့ password မှာ အစောက callcentric မှာ ပေးခဲ့တဲ့ username နဲ့ password ကိုပဲ ထည့်ပေးပါ။ email မှာလည်း call centric က အတိုင်း ထည့်ပေးပါ။ hostname မှာတော့ callcentric.com လို့ ထည့်ပေးပါ။
၃။ Sign Up လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ IPKall ကနေ အီးမေးတစ်စောင် ပို့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အီးမေးလ်ထဲမှာ Your IPKall phone number is ဆိုပြီး ပါပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဖုန်းနံပါတ်ဟာ အမေရိကန် ၀ါရှင်တန်ဒီစီ ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနံပါတ်ဟာ စာဖတ်သူအတွက် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် နံပါတ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကို သူငယ်ချင်းဆီ ပေးလို့ရပါပြီ။
၄။ နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ SIP SoftPhone ကို ကွန်ပျူတာမှာ ထည့်သွင်းဖို့ပါပဲ။ www.nch.com.au ကနေ Express Talk ကို download ဆွဲပြီး ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။
၅။ ExpressTalk ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Wizard တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Next တွေသာ နှိပ်သွားပါ။ SIP Setup ဆိုတဲ့ နေရာ ရောက်ရင်တော့ Yes, I already haveaSIP account ကို ရွေးပြီး Next နှိပ်ပါ။ SIP Proxy မှာ in.callcentric.com ဆိုပြီး ထည့်ပါ။ SIP Number မှာ callcentric က ထုတ်ပေးထားတဲ့ number ကို ထည့်ပေးပါ။ password မှာလည်း callcentric တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ password ကိုပဲ ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်ပါ။
၆။ ExpressTalk က Server နဲ့ ချိတ်ဆတ်တာကို ခေတ္တစောင့်ပါ။ ပြီးဆုံးရင်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းဟာ အ၀င် call လက်ခံဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။
Posted by Xai Yak at 10:43 No comments:
Apple ရဲ့ I-devices တွေအတွက် နောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ios5ကို အသုံးပြုနည်းနဲ့ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေး
တွေကို လေ့လာချင်ရင် လေ့လာဖတ်ဖို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
PC Advisor - February 2012 (HQ PDF)
PC Advisor - February 2012
English | 148 pages | HQ PDF | 119.00 Mb
Computer Shopper/February 2012
Posted by Xai Yak at 10:33 No comments:
သင့်ရဲ့ Folder နဲ့ File Name တွေကို အောက်ပါ Name တွေ ပေးလို့မရဘူးဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့သူများအတွက်နေ
1. CON 2. PRN
3. AUX 4. NUL
5. COM1 6. COM2
7. COM3 8. COM4
9. COM5 10. COM6
11. COM7 12. COM8
13. COM9 14. LPT1
15. LPT2 16. LPT3
17. LPT4 18. LPT5
19. LPT6 20. LPT7
21. LPT8 22. LPT9
Posted by Xai Yak at 10:57 No comments:
ကဲဒီတစ်ခေါက်တာ့ Motherboard အတွင်းမှာရှိသင့်ရှိ ထိုက်တဲ့ Compenents တွေကို
ပြောပြပေးပ့ါမယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ Motherboard ထုတ်တဲ့ Company တော်တော်များများ
နည်းပညာပေါ်မှုတည်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Components တွေကိုထည့်ပေးကြပါတယ်။ ကဲ အခု
နည်းပညာပေါ်လိုက်ပြီး ရှိရမယ့် Components တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ..ဒါဆို စပြီး လေ့လာကြမယ်နော်။
အရင်တုန်းက CPU Socket, တွေသည် PGA Type အမျိုးအစားတွေပါ။ ၎င်း PGA Type တွေကတော့ကြာပါပြီ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ LGA ဆိုတဲ့ ( Lan grid Array ) တွေထွက်ရှိလာပါပြီ။ အခုနောက်ပိုင်း မှာ LGA Socket 775
တွေသည် Intel Dual Core, Celeron Processor Intel Core2Duo တွေကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ
အခုနောက်ဆုံးပေါ် CPU တွေကိုစိုက်ချင်သပဆိုရင် LGA 1156 Socket ဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၎င်း Socket Type
တွေသည် CPU Core i5, C ore i7 ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် CPU နည်းပညာတွေကို ချိက်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း
Motherboard တွေသည် LGA Socket 1156 ကိုကူးပြောင်းလာကြပါပြီ။
Memory ( Main Memory )
Dynamic Memory လို့ခေါ်တဲ့ Main Memory အမျိုးအစားတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် (3) မျိုးရှိပါတယ်။ SO RAM, DDR
RAM နဲ့ RD RAM အမျိုးအစားတွေပါ။ ဒီနေရာမှာ SD RAM တွေကတော့ဖြင့် အရင် P2, P3 Motherboard တွေမှာသုံးခဲ့
တာပါ။ နောက်တစ်ခုဆိုတဲ့ RD ( Rambus Dynamic ) RAM ဟာအရမ်းဈေးကြီးလွန်းလှတာကြောင့် ဈေးကွက်မှာ ပျောက်
သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်း RAM များဟာ P4 Motherboard တွေမှာ သာအသုံးပြုပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ RD
RAM တွေမသုံးတော့ပါဘူး။ ကဲနောက်ဆုံးတော့ DDR RAM အမျိုးအစားပဲရှိတော့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ RAM
နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသုံးများတဲ့ Memory တွေဟာ DDR RAM တွေဖြစ်ပါတယ်။ DDR ဆိုတာကတော့ ( Daubic Data Rate )
ဖြစ်ပြီး Data ကိုလုပ်ဆောင်နိ်ုင်စွမ်း နှစ်ဆပိုတိုးမြှင့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ DDR RAM မှာတော့ အမျိုးအစား (3) မျိုးရှိပါ
တယ်။ ဒါတွေက DDR RAM, DDR2 RAM နဲ့ DDR3RAM တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း(3) ခုရဲ့ကွာခြားချက်တွေကတော့ Memory
Card အတွင်း မှာပါဝင်တဲ့ Pins အရေအတွက်နဲ့ Bus speed တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာလေးတွေ လဲရှိပါတယ်။ ဒါတွေက
တော့ အဓိကအချက်တွေပါ။ နောက်တစ်ခုက ၎င်း RAM တွေကို Motherboard ရဲ့ OIMM Slot မှာ စိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ SD RAM တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ Motherboard တွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ သင်ဟာ Memory
ကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ Data ပို့ဆောင်နိုင်မှုတွေကို အကောင်းဆုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ DDR Memory ကိုသုံးဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ Motherboard ကုမ္ပဏီများသည်လည်း SD RAM မှတစ်ဆင့် DDR Memory ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်
အခုနောက်ပိုင်း Motherboard တွေသည် SAIA Connector တွေပဲပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်း
မွန်တဲ့ Motherboard တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းတုန်းက Hard Disk တွေ Multimedia Derive တွေအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်
IDE Connector တွေနဲ့ပဲချိက်ဆက်ကြပါတယ်။ ၎င်း IDE Connector တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ IDE Cable တွေရဲ့ Data
သွားနှုန်း Speed သည် 33/ 66/100 Mbps ပဲရှိကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ SATA မှာတော့ 3.0Gbps အထိရလာပါပြီ။
ဒါ့အပြင် SATA နည်းပညာဟာ Drive တွေကို Point-to-Point ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့် System Unit အတွင်း
ရှုပ်ထွေးမှုမျိုးကို မဖြစ်စေပါဘူး။ ကဲ...Motherboard ပေါ်မှာ SATA Connector များလေသင့်ရဲ့ သိမ်းဆည်းထားတဲ့
Device တွေရဲ့ Data Speed ကများလေပါပဲ။ ကဲဒီတော့ Motherboard ပေါ်မှာ SATA Connector အရေအတွက်များ
ပုံမှန်အားဖြင့် Motherboard တွေမှာ BIOS Chipset တစ်ခုပဲပါပါတယ်။ ၎င်း BIOS Chipset အတွင်းမှာ CMOS ဆိုတဲ့
Program လေးပါပါတယ်။ ကဲ...ကောင်းပြီ အကယ်၍များ အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားလှတဲ့ ကွန်ပျူတာ Virus တွေကြောင့်
သင့်ရဲ့ BIOS Chipset ဟာပျက်ဆီးသွားမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကဲ...ဒီလိုမျိုးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အခုနောက်
ပိုင်း Motherboard တွေသည် Dual-BIOS ထိပါ Support လုပ်လာကြပါပြီ အကယ်၍သင့်ရဲ့ Primary BIOS ဟာ Virus
ရဲ့ အန္တရာယ် ကြောင့်ထိခိုက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှ Secondary BIOS ဟာဝင်ရောက်ပြီး အစားထိုးလုပ်ဆောင်ပေး
နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ကဲ ..ဒါဆို Dual-BIOS ဟာအခုနောက်ပိုင်း Motherboard တွေမှာမရှိမဖြစ်အရေးပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
Built in I/O Port များ
Motherboard ပေါ်မှာ Built-in I/O Port တွေဟာသိပ်ပြီး ပြည့်စုံကြတာရယ်လို့မရှိပါဘူး။ ပြည့်စုံခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်
မှနည်းပညာလိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက တစ်ချို့သော Motherboard တွေမှာ Monitor ကိုချိတ်
ဆက်ဖို့ရန် တောင်မှ VGA Port ပါမလာပါဘူး။ အဲ့ဒီအခါမှာ သင့်ရဲ့ Motherboard အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ AGP Slot မှာ VGA
ကဒ်စိုက်မှပဲရပါမယ်။ ဒါက မပြည့်စုံတာပါ။ နည်းပညာလိုအပ်ချက်ကတော့ USB 3.0 နည်းပညာကို Support လုပ်လာမှု
နည်းနေပါသေးတယ်။ ဒါအပြင် Network ချိ်တ်ဆက်မှုအပိုင်းမှာလည်း ယခုအခါ Ethernet 1000 mbps အထိရှိနေခြင်း
ဟာ Motherboard ရဲ့ Ethernet10/100 mbps Port ကို နည်းပညာလိုအပ်နေသေးကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်နေပါပြီ။
ကဲ တစ်ခြားသောအကြောင်းအရာ တွေကိုတော့ နောက်ထပ် အပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီး ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ အပေါ်မှာ
ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာ Motherboard ပေါ်မှာရှိသင့်တဲ့ Components တွေနဲ့ နည်းပညာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ.ဒါဆိုရင်
သင်ဘယ် Motherboard ကိုရွေးချယ်နိုင်သလဲ ဆိုတာအခြေခံ နားလည်းသွား လောက်ပါပြီ။
Posted by Xai Yak at 10:46 No comments: